12 PegBoard Display Tools Hooks Shelves แผ่นกระดาน เพ็กบอร์ด เจาะรูแขวนเก็บเครื่องมือช่าง ตะขอขาแขวนฮุก *** New! - My blog
Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit แผ่นกระดาน เพ็กบอร์ด แผงเหล็กเจาะรูติดผนังกำแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง ตะขอขาแขวนฮุก #Pegboard #Hooks #เพ็กบอร์ด #แผ่นเหล็กเจาะรูแขวนเครื่องมือ #ฮุกตะขอลวดขาแขวนเพ็คบอร์ด
# Factory Manufacturing Pegboard Distributor Aluminum board, steel plate Wall Mounting, Industrial Kitchen Design, # Hardware for Steel Shelves, Pegboard Display Hooks Shelf, Hanger Store, Organizing Tools, # Plate, Steel Plate, Hanging Tools Wall Holder Tools Hard Holder Rack
Pegboards and Hooks Quotation <– Click ! ดาวน์โหลดโบรชัวร์
** ราคาที่นำเสนอข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง (เป็นราคามารับเองที่โรงงาน) | Price excluded VAT and Deliveryคุณสมบัติของแผงเพ็กบอร์ด เจาะรูติดผนังแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือ ตกแต่งบ้าน Wall Control Pegboard Pack Specification
1) Powder Coat Wall Pegboard: เลือกวัสดุได้ว่าจะ ผลิตจากอลูมิเนียม หรือจากเหล็กกล้าเกรดพิเศษ พร้อมเคลือบสีพาวเดอร์โค๊ต หนาพิเศษ ป้องกันรอยขีดข่วน คุณภาพสูง มีคุณสมบัติป้องกันสนิมกัดกร่อนดีกว่าเหล็กทั่วไป น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้หลายสภาวะทั้งภายในและภายนอก
2) High-Tech Production: กระดานเพ็กบอร์ดสำเร็จรูป ออกแบบให้พับขอบเก็บมุมเรียบร้อยทั้ง4ด้าน (เพิ่มความแข็งแรง) ติดตั้งง่าย ไม่มีรอยตัดคม วางต่อกันได้ เข้ารูปสวยงาม ทำให้ปลอดภัยในการใช้งาน ใช้ในการตกแต่งห้อง เก็บของให้เกิดความเรียบร้อยและสวยงาม
3) Standard Big Size: แผ่นกระดานเจาะรูแขวนเครื่องมือ ออกแบบพิเศษให้มีขนาดใหญ่มาตรฐาน สามารถนำมาประกอบกันได้ลงตัวเป็นแผงใหญ่ดูดีมีสไตล์ ตั้งแต่ขนาด 50 x 50-400cm., 100 x 100-400cm. หรือประกอบกันเป็นแนวแทยงมุม หรือรูปปิรามิด รูปต่างๆแล้วแต่ดีไซน์
4) General Hook applied: แผ่นพับขึ้นรูปเจาะรูใช้สำหรับแขวนอุปกรณ์ต่างๆ ออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับตัวแขวนฮุค ขนาดมาตรฐาน ตามท้องตลาดได้ทันที รับน้ำหนักได้สูง ใช้เป็นชั้นวางของก็แข็งแรงแรงทนทาน เพราะมีความหนาพิเศษ
5) Made-to-Order (Material/ Color/ Size): กรณีสั่งผลิต สำหรับสีอื่นๆ(ขาว ดำ น้ำเงิน เหลือง แดง เขียว ) หรือเลือกวัสดุที่ใช้ (เหล็ก อลูมิเนียม) หรือขนาดต่างๆนอกเหนือจากขนาดมาตรฐาน ลูกค้าสามารถเลือกตัดจากแผ่นใหญ่ หรือ สั่งผลิตพิเศษ กรุณาติดต่อฝ่ายขาย 6) Heavy Hook Pegboard : รูของ pegboard มีความทนทานไม่เปื่อยลุ่ยหรือบิดงอง่าย แม้จะผ่านการใช้งานมาหลายครั้ง ออกแบบให้ยึดตึดกับฝาผนังโดยไม่ต้องมีโครงเหล็กเสริม มีความแข็งแรงกว่า pegboard ทั่วไป สามารถใช้กับฮุกตะขอขาแขวนเพื่อรับน้ำหนักได้มากกว่า 10 กก. ต่อจุดFeatures of the panel. Hanging Wall Wall Hanging Wall Hanging Wall Wall Wall Mounting Device Wall Control Pegboard Pack Specification
1) Powder Coat Wall Pegboard: Choose the material that will Made of aluminum. Or from special grade steel. Powder Coating Coat Extra thick, high quality, anti-corrosion, better corrosion resistance than steel, lightweight, durable, multi-use, both internal and external.2) High-Tech Production: Finished Board Designed to fold the edge of the corner of the four sides. (Increase strength) easy to install, no sharp cuts, put together to form beautiful. Make it safe to use. Used to decorate the room. Keeps things neat and beautiful.
3) Standard Big Size: Plate Drill Hanger Special design toalarge standard. Can be assembled intoagreat style withalarge panel from 50 x 50-400cm., 100 x 100-400cm oracombination of angles. Or pyramid shape Designs vary.
4) General Hook applied: The hinged insert is used to hang devices. Designed to be compatible with standard hanger hanger on the market immediately. High weight. Used asashelf is strong and durable. Because of the special thickness.
5) Made-to-Order (Material / Color / Size): In case of order For other colors (monochrome, blue, yellow, red, green), or select materials used (aluminum steel) or sizes other than standard size. Customers can choose from large plates or special orders. Please contact sales.
6) Heavy Hook Pegboard: The pegboard hole is durable, does not crack or twist easily. Even through the use of several times. Designed to be fastened to the wall without the need for additional steel frame. Stronger thanaregular pegboard, hooks can be used to hook up to more than 10 kg per point.
Made to Order Big Pegboard งานสั่งทำ กระดานเพ็กบอร์ดสั่งตัดตามขนาด ให้เข้ากับแต่ละพื้นที่
Customers need special size pens to suit each exhibition area. Or makeapanel cabinet tool. Or makeacart of the board size as you want, customers can buyalarge standard. Then cut to the desired area immediately. Or choose us to cut the edge of special paint spray, please contact sales.
Metal Steel Iron Black and Special Color Coated PegBoard | แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดเหล็กกล้าเคลือบสีดำ และ สีพิเศษ คุณภาพสูง
High-Tech Production: High quality finished steel sheet board. Designed to fold the edge of the corner. No sharp cuts. Put together beautiful. Make it safe to use. It is used to decorate the room. And used to store the order and beauty of the residence.
Corrosion Resistance: Designed to be made of special steel material coated with Powder Coat Powder Coat Coating thickness, high corrosion resistance, corrosion resistance better than steel, lightweight, durable, multi-use. Interior and exterior UV resistant to heat. The picture does not twist. By all stages of production, we care to provide customers with the best quality products. Quality assurance that customers need to prove before deciding.
Pegboard Size: Available in standard sizes. And other sizes can be produced.
1) Available stock for both standard size 50 x 50 cm. And 50 x 100 cm. Designed to be able to bring together. Longitudinal, straight, diagonal Combined with various sizes such as 100x100cm., 50x150cm., 100x200cm., 200x200cm.
2) Other sizes can be ordered. Made to order to fit 50 x 150 cm., 100 x 100 cm and other sizes as required.
Made-to-Order (Material/ Color/ Size): กระดานเพ็กบอร์ดเหล็กกล้าเคลือบสีคุณภาพสูงสำเร็จรูป โดยทั่วไปแล้ว มีสินค้าในสต็อคพร้อมจัดส่งให้ลูกค้าได้ทันที ในกรณีสั่งผลิต สำหรับสีอื่นๆ (ขาว น้ำเงิน เหลือง แดง) ขนาดต่างๆนอกเหนือจากขนาดมาตรฐาน กรุณาติดต่อฝ่ายขาย เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
Made-to-Order (Material / Color / Size): High quality finished steel sheet. In general Available in stock ready to ship immediately. In case of order For other colors (white, blue, yellow, red). Size other than standard size. Please contact sales. For more information.
Steel plate drilling rig hanging from the steel plate withaspecial high-quality color coating thickness of 1.2 mm, the strength is not bent, twisted, including the paint is not easy to peel. Long life
Latest! Pegboard is made of aluminum sheets like no other. Texture, bronze, silver, shiny, beautiful, lightweight, easy to install, easy to place on the inside and outside. Guaranteed lifetime, not rusty, not corrosive, not broken, break all conditions.
1. Pegboard Material: Aluminum foil board made of high grade A1100 aluminum grade 1.5mm thickness with two surfaces.
1) Pegboard Glossy: Bronze Silver Shiny skin.
2) Pegboard Hair Line: Bronze Silver The surface of the sheet around the sheet.
2. Pegboard Size: Available in standard sizes. And standard order
3. Corrosion Resistance: Designed to be made of special grade aluminum alloy, it has rust-free, corrosion-resistant properties like steel, light weight and durability. good The picture does not twist. By all stages of production, we care to provide customers with the best quality products. Quality assurance that customers need to prove before deciding.
4. General Hook applied: Folding sheet for hanging the device. Designed for use with hooks. Standard size on the market immediately. High weight. Used asashelf is strong and durable. Because of the special thickness.
High-Tech Production: Aluminum foil board Designed to fold the edge of the corner. No sharp cuts. Put together beautiful. Make it safe to use. It is used to decorate the room. And used to store the order and beauty of the residence.
6. Made-to-Order (Material / Color / Size): Made of aluminum foil board. In general Available in stock ready to ship immediately. In case of order For other colors (white, black, yellow, red) or the material used (non-compressed aluminum grade) or sizes other than standard size Please contact sales. For more information.
ออกแบบมาอย่างลงตัวใช้เป็นทั้งชั้นวาง และช่องเสียบเครื่องมือเครื่องใช้ในแผ่นเดียวกัน ตัวอย่างเป็นช่องเสียบของ เช่น ไขควง กรรมไกร คีม ปากกา ของแต่งบ้านอินเทรนด์ หรือตัวอย่างใช้เป็นชั้นวางหนังสือ เครื่องเขียน กล่อง อุปกรณ์ เครื่องมือ ผลิตจากวัสดุพลาสติคเอบีเอส มีรูขนาด 12มม. ทั่วทั้งแผ่น น้ำหนักเบา สวยงาม ไม่เหมือนใคร มีที่เดียวในโลกนี้
Shelf with multi-purpose tray For use asashelf and plug the tool.
Perfectly designed asarack. And the toolbox in the same sheet. The example isaslot, such asascrewdriver,aplier,apen, home decor. Or use asabookshelf, stationery, equipment, tools, materials, plastic, ABS, 12 mm hole in the lightweight sheet is unique, the only place in the world.
*** ตัวฮุกตะขอขาแขวน แม่กุญแจ ตะขอยูฮุค แอลฮุค ขาแขวนเครื่องมือ ฮุกขาเดี่ยว ฮุคตะขอขาคู่ แบบขาสั้น ยาว รับน้ำหนักได้มาตรฐาน 8 กิโลกรัม ใช้สำหรับเป็นที่แขวนเครื่องมือช่าง เช่น เครื่องมือซ่อมรถ ใช้งานร่วมกับโครงแผงแขวนเครื่องมือพลาสติก หรือแผงแขวนเครื่องมือ ติดตั้งได้ง่าย สะดวก และช่วยประหยัดพื้นที่ในการทำงานได้มาก
Double Hook Standard Length 8 kg. Used for hanging tools such as repair tools. Car Compatible with plastic wall brackets. Or panel hanging tool Easy to install and savealot of work space.
Pegboard Hookers Home Orgainzing Idea Features (Tool Display Cabinet) ไอเดียแผงกระดานเหล็กเจาะรูติดผนังแขวนเครื่องมือ ตกแต่งผนัง ลอฟท์ คลาสสิค โมเดิร์น สุดเก๋ หลายรูปแบบ
Pegboard Hookers Home Features Orgainzing Idea Features (Tool Display Cabinet) Ideas Plate Panels Wall Drill Wall Hanger Wall Decoration Tools Classic Loft Classic Modern Style
#Living Room #Garage #Kid Kindergarten ไอเดียตกแต่งผนังด้วยเพ็คบอร์ดสำหรับห้องต่าง กระดานเพ็กบอร์ดพร้อมฮุคตะขอขาแขวน ใช้สำหรับตกแต่งผนังแทนวอลล์เปเปอร์ แทนชั้นวาง แทนการทาสี ใช้ทั้งห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ที่วางแก้วน้ำเครื่องดื่มรับรองลูกค้า ห้องเลี้ยงเด็ก อู่ซ่อมรถ ห้องเอนเตอร์เทน ห้องครัว ห้องน้ำ นอกจากจะตกแต่งผนังได้แล้ว ยังสามารถทดแทนตู้เก็บของ เป็นชั้นวางรูปแบบต่างๆ
Pegboard isaboard,aboard,apanel,asteel plate,ahole in the wall,awall,ahanging tool,amechanic,apanel,apanel,atool. Tool shelf Tool Pan and Spare Parts Box Made of aluminum, steel, plywood grade export. High quality materials, TIS, strong and durable, can be used to organize and decorate the furniture in every room to beautiful. The art of decorating the house, the factory, such as in the kitchen, used to store the turner, the ladle, the pan, the pot in the room, the tools used to hang screwdrivers, pliers, drill bits, cutters, cutters, cutters in the dressing room or bedroom. Used as hanging jewelry, earrings, necklaces, bracelets, watches, hats, scarves, glasses etc.
#Living Room #Garage #Kid Kindergarten Ideas for Wall Decoration with Peak Board for Different Room, Board, Hook, Hook, Hanger Used to decorate the walls instead of wallpaper instead of the shelves instead of paint. Use the living room, living room, glasses, drinks, customers. Nursery, kitchen, entertainment room, kitchen, bathroom. Can also replace the locker. There are different types of shelves.
Project Reference and Applied Idea for Pegboard Hookers <– Click For Futher Information !
แผ่น Pegboard Hook ราคาซื้อที่ไหน, , Hook ฮุกตะขอลวดขาแขวนที่เกี่ยวสินค้าสิ่งของอุปกรณ์ที่ใช้กับชั้นวางเหล็ก, แผ่น Pegboard Shelves Racking Storage Tools DIY Kit, Pegboard กระดานเพ็กบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังเกี่ยวกำแพง, Pegboard Hook แผงตะขอลวดแขวนเกี่ยวเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง, Hook ฮุกร์ที่แขวนตะขอเหล็กเกี่ยวของติดผนังโชว์สินค้า, Pegboard แผ่นกระดานไม้อัดเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปมีเจาะรูคู่ถี่, Pegboard อุปกรณ์ที่ใส่เก็บแขวนเครื่องมือ, Pegboard ที่แขวนสไตล์ industrial เพ็กบอร์ดแผ่นเหล็กผนังเสียบ, PegBoard ชุดกระดานบอร์ดแผงแขวนเครื่องมือช่างงานสวน, Pegboard Hooks ตัวฮุคตะขอขาแขวนชุบโครเมี่ยมเดี่ยวคู่เอส, Pegboard อุปกรณ์โชว์สินค้าฮุกที่แขวนไขควงคีมค้อน, แผ่น Pegboard Hook ตะขอฮุคชั้นวางแขวนของร้านค้าเอนกประสงค์, Pegboards แผ่นตกแต่งจัดระเบียบบ้านห้องนอนห้องครัว, Pegboard Design Display, Stand Holder Racking Storage, Wall Shelves tools board plan, Double Single wire Metal chrome hole Hookers, Universal accessories for nerds Lowers pliers Craft kitchen sewing yard power garden classroom, Strong Holder tool ideas shelf for home organization, Slat wall Safety looped secured u-shape hardboards , Headboard, Water wall , Room divider, Laundry room Wall art display, Colorful Crafty Office Nursery Closet Garage Garden Drawer Thread Paint Navy framed Tools organizer, cross stitched coat hanger , Spinning display rack, Backsplash in kitchen Seating chart Gift wrap caddy, Pot Rack Instagram Jewelry display case
Pegboard เป๊กบอร์ด คือแผ่นไม้ แผ่นเหล็ก หรือกระดาษอัดที่ถูกเจาะรูเล็กๆ ทั่วทั้งแผ่น ไว้ใช้สำหรับแขวนสิ่งของ จัดเก็บสิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบ และช่วยประหยัดพื้นที่ในห้อง ซึ่งนิยมนำมาใช้จัดเก็บสิ่งของต่างๆ ทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว เครื่องมือช่าง รวมไปถึงเครื่องเขียนต่างๆ ด้วยเช่นเดียวกัน บ้างก็ไม่ตกแต่งอะไรเพิ่มเติม ปล่อยเอาไว้แบบดิบๆ เพื่อคงเอกลักษณ์ของสไตล์ Industry เท่ๆ เอาไว้ ขณะเดียวกันบางคนอาจตกแต่งใหม่ให้สวยงาม ทาสีใหม่ และตกแต่งด้วยของประดับ ของใช้ที่มีสีสันต่างๆ ก็ช่วยทำให้ Pegboard แผ่นนั้นดูน่ารักขึ้นมาได้เช่นเดียวกัน แถมยังกลายเป็นของแต่งบ้านสวยๆ ไปในตัวได้อีกด้วยล่ะค่ะ ว่าแล้ววันนี้เราก็เลยขอนำเอาไอเดียการใช้ Pegboard มาตกแต่งในบ้านให้สวยงามมาฝากให้ชมกันดูเป็นแรงบันดาลใจ เผื่อใครจะสนใจ ไปหา Pegboard แบบนี้มาจัดเก็บของในบ้านให้เรียบร้อยและแต่งบ้านสวยๆ ไปในตัว ลองไปชมกันดูนะคะ ชอบไอเดียไหน เก็บไปประยุกต์ไว้ใช้กันได้เลยCHANCON PROFILE / ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแชนคอน แชนคอน ผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Wall Control metal pegboard panels and slotted tool board panels are first in class when it comes to pegboard tool storage and organization. Wall Control pegboard separates itself from the competition by being superior in durability, strength, versatility, ease of installation, and appearance. Not only do Wall Control pegboard panels offer superior pegboard tool storage, but these pegboards provide this atagreat value. By the time you went to the store and purchased all of the framework, hardware, and supplies needed to hang ugly, old masonite or plastic pegboard sheets you probably would have been finished with your Wall Control pegboard installation and likely even spent less money because everything you need is right in the box. On top of these conveniences, with Wall Control metal pegboard you will haveapegboard that is designed and guaranteed to lastalifetime so it will never need replacing.
Hanger hardware comes in many shapes and sizes, from the basic U,L for hangingasingle tool to double-prong hangers for hammers and even shelf standards. You can buy assorted hangers in kits or stock up on the type you’re likely to use the most. Organize Anything with Pegboard: Ideas and Tips Pegboard is everywhere—panels, hooks, doodads, you name it. Every hand tool in the hardware store is hanging on pegboard. Every bag of bolts, roll of duct tape and tin of Tic Tacs at the checkout counter—pegboarded. Even the pegboard hooks hang on pegboard hooks. But that should come as no surprise. Retailers wantadisplay system that’s sturdy, easy to rearrange and adaptable—the same qualities you need in your work spaces at home. Headboard turned Yellow Crafty Office Drawer organizers, Water Laundry room wall art,cross stitch coat hanger Office closet, Simple Garden tools Garage organization, Nursery Spinning display rack, Paint Framed tools Backsplash in kitchen, Seating chart Instagram display, Pot Rack craft room divider, Jewelry display case, Tufted ottoman Gift wrap caddyPegboard Bins Pegboard Shelf Pegboard Display Peg Board Hooks Pegboard Panel Wire Basket Peg Board Organizer Metal Pegboard Pegboard Hook Accessories Literature Holders Nylon Hooks Shelving Wicker Baskets Shelf Brackets Baskets Panels
It’s time to dust off that pegboard from the garage and get it ready forabrand new life indoors. From workspace organization to nursery decor, pegboards are like the cousins of open shelving, butalittle more eclectic and playful. However, pegboards don’t stop at being great organizational tools; they can be pretty darn stylish too. With some paint and design work, these 17 DIY pegboard ideas have upgraded the standard garage tool setup into elegant, minimalist organizational systems that work in every room of the house.
14. DisplayaCollection: Here,apegboard is used to displayarock collection, but you could use it for any trinkets you havealot of. It’sasimple and fun way to show off the little things you love to look at.Pegboard Peg Board Display Panel Bins Baskets Shelf Storage Organizer Angled Pegboard Hooks and J Pegboard Hooks Pegboard Hat Displays and Pegboard Cap Displays Super Duty Pegboard Hooks Slatbox Pegboard Display Bins Pegboard Clothing Forms Pegboard Tool Displays Pegboard Acrylic Bins Pegboard Card Holders and Pegboard Sign Holders Pegboard Floor Displays Pegboard Specialty Displays Pegboard Mounting Hardware – Pegboard Back Plates Pegboard Hardware Specials Pegboard shelves can add organization to your home. When you make your own shelves, you can construct them to whatever size you want. A custom fit allows you to put them in any location in your home or workshop.
How do they make pegboard? The holes are used to accept pegs or hooks to support various items, such as tools inaworkshop. Pegboard isabrand name of this product that is often used asageneric term for perforated storage boards made of hardboard, wood, metal, or other material.
When you think of pegboards, you probably think of the ugly plywood and metal hook organization systems mostly relegated to garages and workshops. Here’sasimple-to-make dowel-based pegboard attractive enough for any room of the house. The folks at Apartment Therapy show us the way on this one. You will need access to some basic power tools, likeadrill andasaw, but the process is simple. Cut the backboard to its desired size. Measure spacing for your peg holes and drill them out spade bit the size of your dowels. Cut dowels to length and assemble your board. And obviously, you’re not limited toasimple rectangle. You could make it fit whatever space you have or create whatever funky shape your heart desires. DIY Project Idea: How to MakeaModern Pegboard Shelving System
Pegboards are handy tool organizers—everyone knows this. But they can hold much more than you think. Here’s how to build custom shelves and tool holders that will expand the functionality of your pegboard. Using custom cut boards and L screws, you can start hanging your tools in less than 15 minutes. You’ll needasaw to cut your shelves to the desired length,adrill to predrill holes, andachamfer plane. Cuttingachamfer to the top inside edge of the board will allow you to easily attach it to the pegboard.Pegboard Hardware, Pegboard Baskets & PEGBOARD ACCESSORIES Wall Peg Board Baskets Garage Storage Organizer Pegboard Bins Steel Tool Make your pegboards and metal gondola units work more effectively with our complete assortment of faceouts, peg board hooks, store shelves, and retail displays all designed to give you the flexibility needed to create stunning product displays. Store Supply Warehouse has all pegboard baskets and other pegboard accessories in stock and available for immediate shipment on orders placed before 3pm. Also shop our other line of shelves with hooks. Let us assist you with designing all the store fixture displays you need to properly merchandise your products!
We produce different Mid-duty shelving B for different needs. You will find various choice here. Asaspecialized designer and manufacturer of logistics systems, we also provide Pallet racks, heavy duty racking, Light-duty shelving, Mid-duty shelving A, Cantilever Racking, Drawer Racking, Mezzanine Racking , FIFO roller racking , Wire decking, Wire Mesh fence Versatile PegBoard shelving inavariety of sizes and colors. Thousands of uses. Perfect for factories, workshops, garages, display areas, retail stores and more.PegBoard | SlatWall | Grid | Shelving | Moldings | Wainscoting | Metal by the Piece | Impact Protection | Door Hardware Systems | Magnetic Board | FreeStanding Displays Custom Signage | Kits & Bundles | Fasteners | Wall Organizers | Wine Rack | Scratch & Dent Specials
ເຄື່ອງມືການຈັດເກັບ Racking, ເຄື່ອງມືການຈັດວາງ DIY, ຄະນະກໍາມະການປາກກາ, ແຜ່ນເຫຼັກ, ກໍາແພງຫີນ, Wall Hanging, ອຸປະກອນການເກັບຮັກສາ, ເຄື່ອງມືມື hook hook hanging
# ໂຮງງານຜະລິດ Pegboard. ແຜງອະລູມິນຽມ, ແຜ່ນເຫລໍກ ສະແດງເພດານສະແຕນເລດ Hooks Shelf Hanger Store ຈັດປະເພດເຄື່ອງມື, Plank Steel Plate ສໍາລັບເຄື່ອງມືແຂວນ Tools Wall Holder Tools Harder Rack
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ Hooks Hooks Hooks Pegboards ແລະ Hooks ຄຸນລັກສະນະການນໍາສະ ເຫນີໂດຍ ຄະນະກໍາມະການ Peg Board Wall Drill Wall Hanging Equipment ເຄື່ອງມືສໍາເລັດຮູບ Home Decoration
1) Standard Large Size: ການອອກແບບພິເສດເພື່ອມາດຕະຖານຂະຫນາດໃຫຍ່. ສາມາດໄດ້ຮັບການປະກອບເຂົ້າໄປໃນແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສວຍງາມຈາກ 50 x 50-400cm., 100 x 100-400cm ຫຼືການປະສົມປະສານຂອງມຸມ. ຫຼືຮູບຮ່າງ pyramid ແຕ່ວ່າຮູບພາບການອອກແບບ
2) Hook ທົ່ວໄປນໍາໃຊ້: ໃບຍ່ອຍກອບເປັນຈໍານວນຮູສໍາລັບອຸປະກອນຫ້ອຍໄດ້. ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ເຫມາະສົມກັບເຄື່ອງຈັ່ນຈັບແຂນມາດຕະຖານໃນຕະຫຼາດທັນທີ. ນ້ໍາຫນັກສູງ ການນໍາໃຊ້ເປັນ shelf ເປັນທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະທົນທານ. ເນື່ອງຈາກຄວາມຫນາພິເສດ.
3) ດໍາເນີນໄປສັ່ງຊື້ ( Material / ສີ / ຂະຫນາດ): ຄໍາສັ່ງຂອງ. ສໍາລັບສີອື່ນໆ (ສີຂາວ, ສີດໍາ, ສີເຫຼືອງ, ສີແດງ, ສີຂຽວ, ສີຟ້າ) ຫຼືອຸປະກອນ (ເຫຼັກ, ອາລູມິນຽມ) ຫຼືຂະຫນາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ວາຂະຫນາດມາດຕະຖານ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຝ່າຍຂາຍຂອງເລົາ
4) ການຜະລິດສູງເຕັກໂນໂລຊີ: ຄະນະກໍາມະ Peggy ສໍາເລັດຄະນະກໍາມະ. ການອອກແບບເພື່ອພັບແຂນຂອງແຈ. ບໍ່ມີການຕັດແຫຼມ, ຈັດວາງຮ່ວມກັນເພື່ອປະກອບເປັນງາມ. ເຮັດໃຫ້ມັນປອດໄພໃນການນໍາໃຊ້. ການນໍາໃຊ້ເພື່ອ decorate ຫ້ອງ. ການເກັບກໍາເປັນຄໍາສັ່ງທີ່ສວຍງາມແລະ
ຂາຍໄດ້: ທຸກຄໍາ, “+, Hooks pegboard,”
ທີ່ດໍາເນີນສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຈາກຄໍາສັ່ງ pegboard Big Peg ຄະນະກໍາມະການຕັດຂະຫນາດຄະນະກໍາມະການ. ກັບແຕ່ລະພື້ນທີ່ #HooksPegboard Application Hooks, hangers, hooks, boards, boards, boards
#PegBoardHook Accesories # hook hooks ສິນຄ້າລາຍການ, ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ກັບຊັ້ນວາງເຫລໍກ. # ສາຍແຂນສາຍແຂນແຂນຫາງແຂນກັບຂຸມ rack ຂຸມ. #PegboardAccessories
ເຫລໍກເຫລໍກເຫລໍກສີດໍາແລະສີພິເສດເຄືອບ PegBoard | ເຫລໍກເຄືອບສີດໍາແລະສີທີ່ ມີຄຸນະພາບສູງ ພິເສດ
ການຜະລິດສູງ – ເຕັກນິກ: ເຫຼັກສໍາເລັດຮູບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ການອອກແບບເພື່ອພັບແຂນຂອງແຈ. ບໍ່ມີການຕັດແຫຼມ ເອົາໃຈໃສ່ຮ່ວມກັນງາມ ເຮັດໃຫ້ມັນປອດໄພໃນການນໍາໃຊ້. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອ decorate ຫ້ອງ. ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນກ່ວາເຫຼັກ, ອ່ອນ, ທົນທານແລະທົນທານ, ທັງພາຍໃນແລະນອກ, ອຸນຫະພູມຕ້ານ UV, ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ. ຮູບຮ່າງບໍ່ໄດ້ບິດ. ໂດຍທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການຜະລິດ, ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາມີຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບດີທີ່ສຸດ. ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ລູກຄ້າຕ້ອງພິສູດກ່ອນ
Pegboard ຂະຫນາດ: ມີຢູ່ໃນແພກເກດຂະຫນາດມາດຕະຖານ. ແລະຄໍາສັ່ງອື່ນໆມີ
1) Woodstock ພ້ອມສໍາລັບການຂະຫນາດມາດຕະຖານສອງ 50 x 50 ຊຕມ. ແລະ.50 x 100 ຊົມຖືກອອກແບບມາເພື່ອນໍາມາໃຊ້ຮ່ວມກັນ. ເຊັ່ນ: ຍາວ, ກົງ, ຂວາງ ລວມທັງຂະຫນາດຕ່າງໆເຊັ່ນ: 100x100cm, 50x150cm, 100x200cm, 200x200cm, ແລະອື່ນໆ
2) ຂະຫນາດອື່ນສາມາດສັ່ງໄດ້. Made-to-Order ເພື່ອປັບໃຫ້ເຫມາະກັບພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ 50 x 150 ຊຕມ, 100 x 100 ຊຕມແລະຂະຫນາດອື່ນໆຕາມຄວາມຕ້ອງການ. Made-to-Order (ວັດສະດຸ / ສີ / ຂະຫນາດ): ເຫຼັກສໍາເລັດຮູບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ໂດຍທົ່ວໄປ ມີຢູ່ໃນຫຼັກຊັບພ້ອມທີ່ຈະສົ່ງອອກທັນທີ. ໃນຄໍາສັ່ງເພື່ອສັ່ງ ສໍາລັບສີອື່ນໆ (ສີຂາວ, ສີຟ້າ, ສີເຫຼືອງ, ສີແດງ), ຂະຫນາດນອກຈາກຂະຫນາດມາດຕະຖານ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຂາຍ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ແຜ່ນທຽນ, ແຜ່ນເຫລໍກ, ແຂວນຫ້ອຍ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ກຽມພ້ອມດ້ວຍແຜ່ນເຫຼັກ, ມີສີເຄືອບສີພິເສດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ຄວາມຫນາ 1.2 ມົມ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງບໍ່ໄດ້ຖືກບິດ, ບິດ, ລວມທັງສີບໍ່ໄດ້ຖືກປອກເປືອກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຊີວິດການບໍລິການຍາວ
Specifications Pegboard Aluminium Perforated # ແຜ່ນ ໃບອະລູມິນຽມ foil ຄະນະ ກໍາແພງຂຸມກໍາແພງ hanging ອຸປະກອນ ຫລ້າສຸດ ອຸປະກອນ ! Pegboard ແມ່ນເຮັດຈາກແຜ່ນອະລູມິນຽມເຊັ່ນບໍ່ມີອື່ນໆ. ມີຄຸນນະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ. ອຸປະກອນແມ່ນທອງ, ເງິນ, ເຫຼື້ອມ, ສວຍງາມ, ເບົາ, ງ່າຍຕໍ່ການຕົກແຕ່ງ, ງ່າຍໃນການວາງຢູ່ໃນແລະພາຍນອກ. ການຮັບປະກັນຕະຫຼອດຊີວິດສໍາລັບການ corrosion rust, ບໍ່ brittle ທີ່ຈະທົນເງື່ອນໄຂທັງຫມົດ
1. Pegboard ວັດສະດຸ: . ຄະນະກໍາມະ Peg ຄະນະກໍາມະ, ອາລູມິນຽມສໍາເລັດຮູບອຸປະກອນ A1100 ອາລູມິນຽມຊັ້ນ, ຄຸນນະພາບສູງ, ຄວາມຫນາ 1.5 ມມ A. ພື້ນຜິວ (ຂັດຜິວຫນ້າ) ຂອງສອງປະເພດ:
1) pegboard ເຫຼື້ອມເປັນເງົາ: ທອງແດງ, ເງິນ, ຫນ້າເຫຼື້ອມເງົາ
2) pegboard Line ຜົມ: bronze, matte ເງິນ Laikad ປະມານແຜ່ນ2ຂະຫນາດ pegboard :.ມີຂະຫນາດມາດຕະຖານ. ແລະຄໍາສັ່ງ
1) ການ Woodstock ສໍາລັບທັງສອງມີຂະຫນາດມາດຕະຖານ 50 x 50 ຊຕມ. ແລະ 50 x 100 cm.ອອກແບບມາເພື່ອເອົາມາໃຫ້ກັນ. ເຊັ່ນ: ຍາວ, ກົງ, ຂວາງ ລວມທັງຂະຫນາດຕ່າງໆເຊັ່ນ: 100x100cm, 50x150cm, 100x200cm, 200x200cm, ແລະອື່ນໆ
2) ຂະຫນາດອື່ນສາມາດສັ່ງໄດ້. Made-to-Order ເພື່ອປັບໃຫ້ເຫມາະກັບພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ 50 x 150 ຊຕມ, 100 x 100 ຊຕມແລະຂະຫນາດອື່ນໆຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
3. ການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນ: ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີໂລຫະອັນບໍລິໂພກອະລູມິນຽມພິເສດ, ມັນບໍ່ແມ່ນການກັດກ່ອນ, ບໍ່ກັດ, ບໍ່ກັດ, ບໍ່ກັດແລະບໍ່ກັດ. ດີ ຮູບຮ່າງບໍ່ໄດ້ບິດ. ໂດຍທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການຜະລິດ, ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາມີຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບດີທີ່ສຸດ. ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ລູກຄ້າຕ້ອງພິສູດກ່ອນຕັດສິນໃຈ
4. ທົ່ວໄປກ່ຽວນໍາໃຊ້: ໃບຍ່ອຍກອບເປັນຈໍານວນຮູສໍາລັບອຸປະກອນຫ້ອຍໄດ້. ອອກແບບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ກັບ hooks. ຂະຫນາດມາດຕະຖານໃນຕະຫຼາດທັນທີ. ນ້ໍາຫນັກສູງ ການນໍາໃຊ້ເປັນ shelf ເປັນທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະທົນທານ. ເນື່ອງຈາກຄວາມຫນາພິເສດ
5. ຜະລິດຕະພັນສູງສຸດ:Aluminum foxtalk board ການອອກແບບເພື່ອພັບແຂນຂອງແຈ. ບໍ່ມີການຕັດແຫຼມ ເອົາໃຈໃສ່ຮ່ວມກັນງາມ ເຮັດໃຫ້ມັນປອດໄພໃນການນໍາໃຊ້. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອ decorate ຫ້ອງ. ເກັບກໍາແລະການນໍາໃຊ້ຂອງສູງປະຈຸບັນແລະທີ່ສວຍງາມຢູ່ອາໄສ
6. ເຮັດ-to-Order (Material / ສີ / ຂະຫນາດ): ຄະນະກໍາມະ Peg ຄະນະກໍາມະສໍາເລັດອາລູມິນຽມ. ໂດຍທົ່ວໄປ ມີຢູ່ໃນຫຼັກຊັບພ້ອມທີ່ຈະສົ່ງອອກທັນທີ. ໃນຄໍາສັ່ງເພື່ອສັ່ງ ສໍາລັບສີຕ່າງໆ (ສີ, ສີຟ້າ, ສີເຫຼືອງ, ສີແດງ) ຫຼືການຄັດເລືອກວັດຖຸ (ເກັນອາລູມິນຽມທີ່ບໍ່ໄດ້ບີບອັດ) ຫຼືຂະຫນາດນອກຈາກຂະຫນາດມາດຕະຖານ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຂາຍ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ອຸປະກອນການອອກແບບ Hooks ສາຍໄຟສໍາລັບ Hooks Pegboard ສໍາລັບ
Hook Hook Hook Hook ສິນຄ້າລາຍການ, ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ກັບຊັ້ນວາງເຫລໍກ. ສາຍ Hook rails ກໍາແພງແຂນຫ້ອຍ shelf ຈະຮົ່ວໄດ້ #HardBoard #Pegboard #Hooks #Shelf # # Peggy Peck ກະດານກະດານຄະນະກໍາມະ pin # # # SPC ຄະນະກໍາມະ Winnipeg Winnipeg Boards Board # # MPEG ບອດ plank. # Wall tiled wall tiled. # ແຜ່ນເຫຼັກ ຖາດເຫຼັກ # shelf # rack # Tools # Hook # ຍຶດ # ກ່ຽວກັບສິນຄ້າ # Hook # Hook # ສາຍສຽງສຽງ # ຍຶດ # Hook ຍຶດ # Hook ຫ້ອຍປະຈຸບັນຄະນະກໍາມະ # ແຜ່ນໃນຂຸມເຈາະອະລູມິນຽມ # ແຜ່ນດີໃຈຫລາຍ. # Plate # ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າອຸປະກອນເສີມ Wall Pegboard ມາໃນຫຼາຍໆ hooks, hangers, ເຄື່ອງຈັກສານ, ແລະຖືເຄື່ອງມື. ການຕິດຕັ້ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ, ເຄັດລັບຊີ pegs ເທິງເຂົ້າໄປໃນຄະນະກໍາມະການແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ rotate ລົງ. Pegboard ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນັບຕັ້ງແຕ່ມັນເປັນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະ. ກໍາຫນົດຄ່າໃນ whichever ວິທີການທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. hangers Specialty ມີສໍາລັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈາກປືນ screw ກັບຫັດຖະກໍາອຸປະກອນ.
Pegboard Hookers Home Orgainzing
Ideas Ideas Ideas for panels wall, hang wall wall hangers, tool decor decorative wall, loft classic, style modern.
Pegboards Kit ປະເພດປົກກະຕິການນໍາໃຊ້ແຜງ, ແຜງ, ໂຄງປະກອບເຫລໍກ, ຮູ, ຜະຫນັງ, ຝາ, ຫີບຫ້ອຍ, ອຸປະກອນການເກັບຮັກສາ, ເຄື່ອງມື
Pegboard ແມ່ນຄະນະກໍາມະການ, ຄະນະກໍາມະການ, ຄະນະກໍາມະການ, ກໍາແພງເຫຼັກ, ຂຸມໃນກໍາແພງ. ຜະລິດຈາກອະລູມິນຽມ, ເຫລໍກ, ຊັ້ນນໍາເຂົ້າຈາກໄມ້ອັດ ອຸປະກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ມາດຕະຖານ TIS ແມ່ນເຂັ້ມແຂງແລະທົນທານ, ພວກເຂົາສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອຈັດຕັ້ງການຕົກແຕ່ງໃນທຸກໆຫ້ອງ. ໃຊ້ເປັນຫ້ອຍໄມ້ປະດັບ, earrings, necklaces, bracelets, Watch, scarves, hats, ແວ່ນຕາ, ແລະອື່ນໆ#SportPegBoard. ແນວຄິດຕົກແຕ່ງດ້ວຍກໍາແພງພາຫະນະ #ShoesPegBoard ກະດານເພັດສໍາລັບການເກັບເກີບ #LadyPegBoard ໂຕ໊ະຫ້ອຍ, ມຸມນອນ, ຕຸ້ມຫູ, ສ້ອຍຄໍ, ເຄື່ອງນຸ່ງຜູ້ຍິງ
ເດັກຍິງທຸກໆຄົນໄດ້ຖືກຮັບປະກັນທີ່ຈະສະສົມຖົງແລະອຸປະກອນທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ແທ້ໆ. ແລະບັນຫາແມ່ນບໍ່ມີການເກັບຮັກສາ. ທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ຈະເຮັດວຽກເພື່ອ dismantle ຫນຶ່ງໃນເວລາໃດຫນຶ່ງ. ບັນຫານີ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງງ່າຍດາຍ. ບໍ່ໃຫ້ຝາວ່າງ, ຕິດຕັ້ງ pegboard ກັບກໍາແພງ. ໃນປັດຈຸບັນຂ້ອຍສາມາດເພີດເພີນກັບຖົງແລະສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ຖືກຫ້ອຍຢູ່ທີ່ນີ້ຫຼືຖ້າໃຜບໍ່ຢາກຕິດກັບກໍາແພງ, ມັນຈະຕິດຢູ່ກັບກະເປັກເລັກໆຫຼືແຈທີ່ເຮົາໃຊ້ເລື້ອຍໆ. #ToolsAccessoriesPegBoard # ກະດານຄະນະກໍາມະການເກັບຮັກສາເຄື່ອງມື ໃຊ້ປອກເປືອກເທິງກໍາແພງຂ້າງເທິງໂຕະ. ເລືອກເອົາຂະຫນາດທີ່ຕ້ອງການ. ນອກເຫນືອໄປຈາກການໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ເຄື່ອງ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການວາງແຜນຫຼືເຄື່ອງຫມາຍທີ່ມີຮູບພາບທີ່ສວຍງາມທີ່ມີປະດັບເພັດທີ່ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ເປັນເອກະລັກແລະຊ່ວຍສ້າງຈິດສໍານຶກໃຫ້ດີ.
ງະຂອງຫົວຕຽງ, ກໍາແພງນ້ໍາ, divider ຫ້ອງ, ຫ້ອງຊັກລີດສະແດງສິນລະປະກໍາແພງ, ສີ Crafty Office Nursery Closet Garage ສວນລິ້ນຊັກກະທູ້ສີກອງທັບເຮືອ Tools ກອບອົງການຈັດຕັ້ງ, ລະຫວ່າງ stitched ໄມ້ແຂວນເສື້ອ, ຊັ້ນສະແດງ Spinning, Backsplash ໃນເຮືອນຄົວນັ່ງຕາຕະລາງຫໍ່ຂອງຂວັນ caddy, ຫມໍ້ຊັ້ນ Instagram. ກໍລະນີສະແດງເພັດໃຊ້ໃນ #KitchenPegBoard # Ideas, ຄະນະໃນເຮືອນຄົວໄດ້ ຈັດແຈງເຮືອນຄົວໂດຍໃຊ້ pegboard fastened ກັບກໍາແພງຫີນຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງທີ່ຕ້ອງການ. ຈົ່ງວາງຮູບຮ່າງດີ. ເພື່ອຮັບປະກັນເຟີນີເຈີເຮືອນຄົວຫ່າງອອກງາມແລະງ່າຍທີ່ຈະເລືອກເອົາ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານມືອາຊີບແນະນໍາຜະລິດຕະພັນອອກແບບເຮືອນ. ກໍາແພງຫີນ Wall ກໍາແພງອຸປະກອນເກັບກໍາກໍາແພງຫີນ ສູນກາງຂອງການຕົກແຕ່ງກໍາແພງຫີນແມ່ນ strange, ອອກແບບເຮືອນ, ເບິ່ງ elegant, ເພີ່ມມູນຄ່າ. ບໍ່ແມ່ນນັກອອກແບບ ທ່ານສາມາດສ້າງກໍາແພງຫີນຂອງທ່ານເອງ, ແນວຄວາມຄິດ, ເຢັນ, ເປັນເອກະລັກ, ຮູບຮ່າງ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້, ຄຸນນະພາບ, ຍືນຍົງແລະມີລາຄາແພງ. ໂດຍການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃກ້ສິ່ງປະດິດສ້າງຂອງເຮືອນທີ່ເຮັດຈາກວັດສະດຸສິ່ງເສດເຫຼືອ. ການດົນໃຈທີ່ບ້ານທີ່ທັນສະໄຫມສ້າງແຮງບັນດານໃຈ IDEA ເພື່ອ decorate ຝາພາຍໃນຂອງຫ້ອງ. DIY ກໍ່ສ້າງໃນການອອກແບບເຮືອນ trendy. ເຟີນິເຈີທີ່ລອຍຕົວ ຮູບພາບພາເລື່ອນທີ່ສວຍງາມ. ຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຟົ້ງຊີ່. ແທນຮູບເຈ້ຍຝາ, ແຜ່ນຕິດ, ກໍາແພງຫີນ, ກໍາແພງ 3D, ເພດານ, ທົນທານຕໍ່ນ້ໍາ, ຕົນເອງຕິດຕັ້ງ.
ຄະນະກໍາມະທີ່ເປັນຫົວຫນ້າຫ້ອງນອນ, ຫ້ອງຮັບແຂກ, ຫ້ອງນອນ, ດໍາລົງຊີວິດທຸລະກິດ Inn ສໍາລັບຕຶກອາຄານຫ້ອງການ, ອາພາດເມັນທີ່ຢູ່ອາໄສເຮືອນ Flat Office ໂຮງແຮມໃນໂຮງງານຜະລິດ, ສາງ, ອາຄານ, ຮ້ານວາງສະແດງແລະຮ້ານ, resorts Spa, ປະເທດ homes for blasts ທັດ. Space ສ້າງສັນ Armrests ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ hanging, ແວ່ນຕາ, ຖົງ, ເກີບ, hangers ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ກະຕ່າຊື້ເຄື່ອງ Plastic Storage Box ສ້ອຍຂໍ້ມືສາຍຝາສະແດງ – ສາຍຄໍ book rack, book rack, cd ຢາງ, ລາຄາ, ຜູ້ຖື marker ຊັ້ນຂອງສັບພະສິນຄ້າ, mini mart ແບບການສົ່ງເສີມໃນລອກເອົາເປືອກ Loft ວິນ Boutique Loft Modern ຮ່ວມສະໄຫມ, ເຂດຮ້ອນ, Neo-ຄລາສສິກ, Retro, Asian Boutique Resort, Pantip, Khaidee, ຕົກແຕ່ງບ້ານ, ບ້ານແລະສວນ, Ikea, Homeworks, ໂຮມໂປ, ໄທ Watsadu Times. ວັດສະດຸ, Interior Architectural Design
#ClipBoardStationeryPegBoard # Wallpapers ກະດານທີ່ມີ clipboard clipboard clipboard # Penn Stationery Equipment ແນວຄວາມຄິດອອກແບບກໍາແພງຫີນ ມີ clipboard ຊອກຫາ clipboard ສີທີ່ມີສີສັນ. ໃນກໍລະນີຄວາມຢ້ານກົວວ່າກໍາແພງຈະຖືກທໍາລາຍ. ສາມາດນໍາໃຊ້ຄະນະກໍາມະການການຊອກຫາຫຼືຊອກຫາຄະນະກໍາມະການທີ່ຕິດກັບກໍາແພງກ່ອນທີ່ຄລິບບອດຈະຕົກແຕ່ງ. clipboard ສ່ວນບຸກຄົນນໍາເອົາຮູບພາບຫຼືຮູບແຕ້ມຂອງເດັກນ້ອຍໃຫ້ຊີວິດສໍາລັບເຮືອນທີ່ມີຊີວິດຊີວາຫຼື clipboard ຂອງຂະຫນາດຕ່າງໆ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເອົາຮູບພາບທີ່ມີ clip ຄວາມຈໍາເປັນກັບມັນ. ມັນເປັນຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປວ່າພວກເຮົາຮູ້ຈັກກັນດີ. ການອອກແບບຝາສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວໂດຍມີຮູບພາບ. ແຕ່ມັນສາມາດເພີ່ມ chic ໂດຍເລືອກທີ່ຈະໃຊ້ຮູບພາບ. ຈະມີຮູບພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ຫຼືເລືອກຮູບພາບທີ່ມີຂະຫນາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ທັງສອງຂະຫນາດນ້ອຍແລະໃຫຍ່ ເພີ່ມຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ກັບກໍາແພງ.
#DIYCraftsBoard #KnittingSewingPegBoard # ຄະນະກໍາແພງກະດານທີ່ມີການ
ເຮັດວຽກ ຕົບແຕ່ງ DIY ມີຫຼາຍອຸປະກອນ. ຈົນກ່ວາບໍ່ມີບ່ອນທີ່ຈະຈັດເກັບ. ສາມາດນໍາເອົາແນວຄິດນີ້. ຈັດຈັດການຂອງທ່ານ. ນອກເຫນືອໄປຈາກກໍາແພງກໍ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍເກີນໄປ. ມັນຍັງມີປະໂຫຍດຈາກການເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການຊອກຫາ, ເບິ່ງງາມແລະງ່າຍຕໍ່ການນໍາໃຊ້ເຊັ່ນກັນ.
ໄມ້ທີ່ຖືກຕັດແມ່ນໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍທີ່ຈະຜະລິດແລະຈະແຕກແລະແຕກແຍກພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຫນັກ, ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍ່ຖືກເລືອກສໍາລັບເຫດຜົນກ່ຽວກັບຄວາມງາມ. ໄມ້ທີ່ມີລາຄາບໍ່ແພງເຊັ່ນໄມ້ແປກມັກຖືກນໍາໃຊ້ແລະມັນອາດຈະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍທາງເຄມີສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະລັກສະນະດັບເພີງ, ຫຼືປ່ຽນເປັນໄມ້ອັດກ່ອນ. ໄມ້ທີ່ຖືກຕັດນັ້ນອາດຖືກຕິດຕັ້ງເປັນແຖບບາງໆແທນທີ່ຈະເປັນຮູບສີ່ຫລ່ຽມຂອງແຜ່ນແຂງແຂງ. ລະບົບປະຕິບັດການໂລຫະມັກຈະອອກຈາກເຫຼັກ. ປອກເປືອກໂລຫະມັກຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນແຖບ, ຍ້ອນວ່າມັນຈະມີລາຄາແພງ, ມີລາຄາແພງແລະບໍ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຂາຍໃນແຜ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່. pegboards ໂລຫະທີ່ຫນາແຫນ້ນຈະບໍ່ແຕກແຍກກັນລະຫວ່າງຈຸດທີ່ຕິດຕັ້ງ. ແທນທີ່ຈະ, ການຕິດຕັ້ງຂອງລະບົບກ່ຽວກັບຫນ້າດິນເຊັ່ນ: ໄມ້ beam ຫຼື sheetrock ມັກຈະລົ້ມເຫຼວພາຍໃຕ້ນ້ໍາຫນັກຢ່າງຮຸນແຮງກ່ອນທີ່ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເພິ່ນເຮັດ. ຜູ້ຜະລິດແນະນໍາໃຫ້ລູກຄ້າວາງເຄື່ອງມືແລະເຄື່ອງມືອື່ນໆໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ຄາດເດົາຂອງຈຸດທີ່ຕິດຕັ້ງ. ລະບົບ pegboard ໂລຫະທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງນໍາໃຊ້ຮູຂຸມຂົນ, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບອື່ນໆມີຂຸມຫຼັງຂຸດ.
#PegboardHook Shelves ເຄື່ອງມືຈັດເກັບແຕ້ມແຜ່ນ
ກໍາແພງຫີນເພດານກໍາແພງຫີນຫຸ້ມແຂນ ການອອກແບບຂອງແຜ່ນເຫຼັກເພື່ອພັບຂຶ້ນແລະເຈາະຊ່ອງຫວ່າງດຽວກັນ. ໃນແຕ່ລະຂຸມ, ມັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອ hook hook hook hooks ສໍາລັບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ເຄື່ອງມື, ເຄື່ອງປະດັບ, ຖົງ, ຜະລິດຕະພັນ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ. ຄໍາວ່າ pegboard ແມ່ນຊື່ຂອງຜະລິດຕະພັນນີ້ທີ່ມັກໃຊ້ເປັນຄໍາສັບທົ່ວໄປ. ສາມາດຜະລິດຈາກເອກະສານໄດ້ ໄມ້, ໂລຫະຫຼືວັດສະດຸອື່ນໆແມ່ນມີຄວາມນິຍົມຫຼາຍໃນການຈັດການອອກແບບ.
ແຜງອະລູມິນຽມ, ແຜ່ນເຫລໍກ Hole in ການອອກແບບຝາເຮືອນຄົວໂຮງງານຜະລິດແບບອຸດສາຫະກໍາ, # plank ໄມ້ເຫຼັກແຜ່ນຮູກອບເປັນຈໍານວນ. ເຄື່ອງມືສໍາລັບກໍາແພງຫີນເຄື່ອງມືສໍາລັບ hardboard ຊື່ຍີ່ຫໍ້ຂອງຜະລິດຕະພັນນັ້ນເອງທີ່ມັກຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຄໍາສັບທົ່ວໄປສໍາລັບການເກັບຮັກສາກະດານ perforated ເຮັດຈາກ hardboard, ໄມ້, ໂລຫະ, ຫຼືອຸປະກອນອື່ນໆ.
ກໍາແພງຕິດຜະຫນັງຕິດຜະຫນັງ, ອຸປະກອນ ມາດຕະຖານ
#PegboardsHook Installation # ຕິດຕັ້ງຄະນະ
ແຜ່ນແຂງແຜ່ນແຂງແລະລະບົບທີ່ຄ້າຍຄືກັນແມ່ນເຮັດດ້ວຍວັດຖຸຕ່າງໆ, ແຕ່ລະຄົນມີລັກສະນະຕ່າງໆທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບການນໍາໃຊ້ທີ່ເປັນໄປໄດ້. ແຜ່ນແຂງແຜ່ນແຂງແບບທໍາມະດາແມ່ນເຮັດດ້ວຍເສັ້ນໃຍໄມ້, ໂດຍປົກກະຕິດ້ວຍການເພີ່ມຂີ້ເຫຍື້ອແລະເຮັດດ້ວຍຄວາມເຄືອບດ້ວຍເຄືອບດ້ວຍນ້ໍາມັນລະອຽດອ່ອນໆແລະການຕົ້ມທີ່ມີຄວາມອຸນຫະພູມສູງເພື່ອປົນນ້ໍາມັນ. ນີ້ສະຫນອງນ້ໍາຫຼາຍແລະການຕໍ່ຕ້ານຜົນກະທົບ, ແຂງ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile. ແຜ່ນແຂງຈະງໍແລະຂັດກັບອາຍຸແລະມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະຈະມີນ້ໍາຫນັກຢ່າງຫນັກ (ນ້ໍາຫນັກທີ່ແນ່ນອນແມ່ນອີງໃສ່ຂະຫນາດແລະຄຸນນະພາບຂອງແຜ່ນແຂງ).
ແພ, ກໍາແພງຫີນ, ຮົ້ວຝາ, ຜູ້ຖືເຄື່ອງມື ຖືກອອກແບບໃຫ້ມີຂຸມມາດຕະຖານ. ການຕິດຕັ້ງແມ່ນງ່າຍດາຍ. ໂດຍການເຈາະກໍາແພງທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດທັງສີ່ດ້ານ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃຊ້ bolt ແລະ screw ກັບຕໍາແຫນ່ງທີ່ຕ້ອງການທັນທີ.
ການຕິດຕັ້ງລະບົບ pegboard ເປັນວິທີທີ່ໄວທີ່ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ອົງກອນແລະເພີ່ມທະວີການເຮັດວຽກທີ່ມີຢູ່. ໂດຍໃຊ້ພື້ນທີ່ຕັ້ງ, ເຄື່ອງມືສາມາດສັງເກດໄດ້ແລະຈັດຮຽງໄດ້ງ່າຍດາຍ. ເນື່ອງຈາກ pegboard ແມ່ນການຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງຕາຕະລາງ 1 “x 1”, ເຄື່ອງມື hangers ສາມາດຍ້າຍແລະ reconfigured ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການໃນອະນາຄົດ. ຖ້າຫາກວ່າບ່ອນຈອດລົດຂອງທ່ານຖືກສ້າງຂຶ້ນມາກ່ອນຫນ້າທໍາອິດຂອງປີ 1990, ໂອກາດທີ່ທ່ານຈະມີກໍາແພງກໍາແພງທີ່ເປື້ອນ. ລະຫັດໄຟໄຫມ້ໃນປີຕໍ່ມາຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງລະບົບແຫ້ງແລ້ງ. ເນື່ອງຈາກອຸປະກອນ pegboard ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງຄະນະທີ່ເຫມາະສົມກັບການຕິດຕັ້ງທີ່ມີການຕິດຕັ້ງ, ການປອກເປືອກແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການຕິດຕັ້ງໃນພື້ນທີ່ແຫ້ງແລ້ງ.
Pegboard, ທີ່ເອີ້ນວ່າແຜ່ນແຂງຫຼືແຜ່ນເຈາະເລິກ, ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາວິທີການເກັບຮັກສາທີ່ງ່າຍດາຍແລະລາຄາແພງທີ່ສຸດສໍາລັບເຄື່ອງມືຫ້ອຍແລະສິ່ງຂອງອື່ນໆ. ເມື່ອຕິດຕັ້ງກັບກໍາແພງຫີນແລະອອກແບບດ້ວຍສຽງໂລຫະ, ປອກເກີໄດ້ສະຫນອງວິທີການທີ່ສະດວກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລາຍການຕ່າງໆເຂົ້າໄປໃນບ່ອນທີ່ມີຫລັງຂອງ drawer ຫຼືດ້ານລຸ່ມຂອງເຄື່ອງມືໃນຫນ້າເອິກ. Pegboard ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການປ່ຽນແປງການຈັດການຫຼືການເກັບກໍາລາຍການລາຍການຂອງທ່ານ, ເພາະວ່າທ່ານສາມາດຕັ້ງເຕົ້າໂລຫະຕ່າງໆຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການໂດຍບໍ່ມີການວັດແທກ, ຂຸດຂຸມ, ຫຼືເລັບມືເຂົ້າໄປໃນກໍາແພງ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, pegboard ໄດ້ຮັບຜິດຊອບເປັນທາງເລືອກການເກັບຮັກສາລາຄາຕໍ່າສໍາລັບການດັ່ງນັ້ນມີ multitude ຂອງ hooks ແລະວົງເລັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ທ່ານສາມາດຊື້ເພື່ອຮັບຮອງເອົາເກືອບທຸກສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະວາງສາຍ. ສູນກາງເຮືອນໃດກໍ່ຈະປະຕິບັດທັງ pegboard ແລະ hooks. ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດຕັ້ງ pegboard ຢ່າງຖືກຕ້ອງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄ່າສູງສຸດຈາກມັນ. ຖ້າຫາກວ່າກໍາແພງບ່ອນຈອດລົດຂອງທ່ານໄດ້ມີການສັ່ນສະເທືອນ, ທ່ານພຽງແຕ່ສາມາດທໍ່ໃສ່ປອກເປືອກ. ຮົ້ວເປົ່າຫວ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນໄມ້ຈະສະຫນອງການແຈກຢາຍທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການໃສ່ທໍ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນກໍາແພງແລ້ວ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດຕັ້ງຂອບຂອງເສັ້ນລວດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ pegboard ເພື່ອສ້າງການເກັບກູ້ທີ່ຈໍາເປັນແລະໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງເພີ່ມຕື່ມ. ມັນກໍ່ເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ຈະສ້າງເຟຣມທີ່ອ້ອມແອ້ມ pegboard ຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ໂຄງການມີຮູບລັກສະນະທີ່ສົມບູນແບບ. ຖ້າຫາກວ່າບ່ອນຈອດລົດຂອງທ່ານມັກຈະມີຄວາມສະອາດ, ປະທັບຕາທັງສອງຂ້າງຂອງປອກເປືອກດ້ວຍເຄືອບຂອງເຄືອບສີຫຼື primer ແລະສີ exterior; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນກໍ່ຈະດູດຊຶມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຫຼືອາດຈະຫລຸດລົງ. ຮົ້ວເປົ່າຫວ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນໄມ້ຈະສະຫນອງການແຈກຢາຍທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການໃສ່ທໍ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນກໍາແພງແລ້ວ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດຕັ້ງຂອບຂອງເສັ້ນລວດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ pegboard ເພື່ອສ້າງການເກັບກູ້ທີ່ຈໍາເປັນແລະໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງເພີ່ມຕື່ມ. ມັນກໍ່ເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ຈະສ້າງເຟຣມທີ່ອ້ອມແອ້ມ pegboard ຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ໂຄງການມີຮູບລັກສະນະທີ່ສົມບູນແບບ. ຖ້າຫາກວ່າບ່ອນຈອດລົດຂອງທ່ານມັກຈະມີຄວາມສະອາດ, ປະທັບຕາທັງສອງຂ້າງຂອງປອກເປືອກດ້ວຍເຄືອບຂອງເຄືອບສີຫຼື primer ແລະສີ exterior; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນກໍ່ຈະດູດຊຶມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຫຼືອາດຈະຫລຸດລົງ. ຮົ້ວເປົ່າຫວ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນໄມ້ຈະສະຫນອງການແຈກຢາຍທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການໃສ່ທໍ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນກໍາແພງແລ້ວ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດຕັ້ງຂອບຂອງເສັ້ນລວດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ pegboard ເພື່ອສ້າງການເກັບກູ້ທີ່ຈໍາເປັນແລະໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງເພີ່ມຕື່ມ. ມັນກໍ່ເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ຈະສ້າງເຟຣມທີ່ອ້ອມແອ້ມ pegboard ຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ໂຄງການມີຮູບລັກສະນະທີ່ສົມບູນແບບ. ຖ້າຫາກວ່າບ່ອນຈອດລົດຂອງທ່ານມັກຈະມີຄວາມສະອາດ, ປະທັບຕາທັງສອງຂ້າງຂອງປອກເປືອກດ້ວຍເຄືອບຂອງເຄືອບສີຫຼື primer ແລະສີ exterior; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນກໍ່ຈະດູດຊຶມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຫຼືອາດຈະຫລຸດລົງ. ມັນກໍ່ເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ຈະສ້າງເຟຣມທີ່ອ້ອມແອ້ມ pegboard ຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ໂຄງການມີຮູບລັກສະນະທີ່ສົມບູນແບບ. ຖ້າຫາກວ່າບ່ອນຈອດລົດຂອງທ່ານມັກຈະມີຄວາມສະອາດ, ປະທັບຕາທັງສອງຂ້າງຂອງປອກເປືອກດ້ວຍເຄືອບຂອງເຄືອບສີຫຼື primer ແລະສີ exterior; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນກໍ່ຈະດູດຊຶມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຫຼືອາດຈະຫລຸດລົງ. ມັນກໍ່ເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ຈະສ້າງເຟຣມທີ່ອ້ອມແອ້ມ pegboard ຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ໂຄງການມີຮູບຮ່າງທີ່ສົມບູນແບບ. ຖ້າຫາກວ່າບ່ອນຈອດລົດຂອງທ່ານມັກຈະມີຄວາມສະອາດ, ປະທັບຕາທັງສອງຂ້າງຂອງປອກເປືອກດ້ວຍເຄືອບຂອງເຄືອບສີຫຼື primer ແລະສີ exterior; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນກໍ່ຈະດູດຊຶມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຫຼືອາດຈະຫລຸດລົງ.
ແຜ່ນແຂງແຂງແລະລະບົບທີ່ຄ້າຍຄືກັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນທ່ອນໄມ້. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວຖືກຕິດດ້ວຍມືແລະສະຫນັບສະຫນູນດ້ວຍຕົນເອງດ້ວຍຄວາມແຮງແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແຕ່ລະບົບບາງໆໃຊ້ screws ແທນ. screws ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍສາຍເພີ່ມເຕີມເພື່ອປ້ອງກັນໂລຫະຈາກການໂຄ້ງລົງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ. ຮວບຮວມໃນການປະຕິບັດເປັນການເກັບຮັກສາສໍາລັບຊະນິດຂອງວັດຖຸເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມືແລະທີ່ສໍາຄັນ. ລະບົບໂລຫະຫນັກທີ່ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນວັດຖຸທີ່ຫນັກແຫນ້ນເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຫຍ້າທຽມແລະລົດຖີບທີ່ເກັບໄວ້ຕັ້ງຕາມແນວຕັ້ງ. ລະບົບການເກັບຮັກສາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົວເຮືອນເຊັ່ນ: ບ່ອນຈອດລົດ, ບ່ອນເກັບຮັກສາຫຼືກອງປະຊຸມ. ພວກເຂົາອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນມືອາຊີບເຊັ່ນໂຮງງານ, ພ້ອມກັນກັບບ່ອນເກັບມ້ຽນສໍາລັບຮ້ານຄ້າຫຼຸດຜ່ອນ (ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຂະຫນາດຫນາໃຊ້ໃນຮ້ານໃຫຍ່), ແຕ່ເຫັນວ່າມີພື້ນທີ່ສີຂາວຫຼາຍ.
ຕິດຕໍ່ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ || ຕິດຕໍ່ອີເມວກະລຸນາແຜ່ນເສັ້ນຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະສົມບັດຜະລິດຕະພັນທີ່ຈະຕັດການທົດສອບການຕິດຕັ້ງ A. ຕິດຕໍ່. ພວກເຮົາ: ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ Get Map ແນະນໍາເພີ່ມເຕີມ B. ລາຄາ, ສະເຫນີລາຄາ: ລາຄາສະເຫນີລາຄາການບິນ C. ທັງຫມົດເອກະສານຂອງໂຄງການນີ້: ລູກຄ້າ. Application ວິທີການຊື້ D. ມີຄວາມຫມາຍ of Glass Fiber Reinforced Vinyl ້ໍາຢາງ້ໍາຢາງຂອງອາຫານທີ່ Grade ໄດ້ FRP Fiberglass E. ການບໍລິການ, Grating: ການອອກແບບ, ຜະລິດ, ການຕິດຕັ້ງແລະທົດສອບຄວາມເຂັ້ມແຂງ – ເຄມີ Sales F. ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍທີ່ຕ້ອງການ: ຖາມ. ໃນຖານະຜູ້ຂາຍ ຈ້າງພະນັກງານຂາຍ
ແຜງອະລູມິນຽມ, ແຜ່ນເຫລໍກ Hole in ການອອກແບບຝາເຮືອນຄົວໂຮງງານຜະລິດແບບອຸດສາຫະກໍາ, # plank ໄມ້ເຫຼັກແຜ່ນຮູກອບເປັນຈໍານວນ. ສິນຄ້າຜູ້ບໍລິໂພກສໍາລັບຫ້ອຍຢູ່ຝາເຄື່ອງມື Holder Rack ບອດ.
ແຜ່ນ Pegboard Hook ລາຄາຊື້ທີ່ ,, ຕະຂໍຂາສາຍ hook ຫ້ອຍໃສ່ຈຸດປະສົງຂອງຕົນໂດຍມີ shelves, ແຜ່ນເຫຼັກ Pegboard Shelves Racking ການເກັບຮັກສາຊຸດເຄື່ອງມື DIY, Pegboard ຄະນະກໍາມະການສະພາບໍລິ Winnipeg ຂອງເຫຼັກແພງ perforated ກ່ຽວກັບກໍາແພງຫີນໄດ້, Pegboard. Hook แผงตะขอลวดแขวนเกี่ยวเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง, Hook ฮุกร์ที่แขวนตะขอเหล็กเกี่ยวของติดผนังโชว์สินค้า, Pegboard แผ่นกระดานไม้อัดเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปมีเจาะรูคู่ถี่, Pegboard อุปกรณ์ที่ใส่เ ຮ້ານເຄື່ອງມືຫ້ອຍ, Pegboard ຫ້ອຍແບບ plug ກໍາແພງອຸດສາຫະກໍາ Peggy ຄະນະກໍາມະຈານ PegBoard ຊຸດເຄື່ອງມືບອດ Panel, ສວນ, Pegboard Hooks The hooks ສຽງຫ້ອຍຂາເຫລັກຫຸ້ມເປັນ chrome ນ້ໍາ S. , Pegboard ອຸປະກອນສະແດງ. hook ຫ້ອຍ screwdriver, pliers, hammer, ແຜ່ນ pegboard shelves hook hook hook ຫ້ອຍຂອງຮ້ານອະເນກປະສົງ, pegboards ແຜ່ນ decorate ເຮືອນ, ການຈັດຕັ້ງ, ຫ້ອງນອນ, ເຮືອນຄົວ, pegboard ການອອກແບບການສະແດງ, ຢືນ Holder Racking ການເກັບຮັກສາ, Wall ເຄື່ອງມື shelves ແຜນຄະນະກໍາມະ ,.
Pegboard ເປັນເຫຼັກແຜ່ນກະດານ peg, ໄມ້ຫຼື papier ຂຸມຂະຫນາດນ້ອຍໄດ້ຖືກເຈາະໃນທົ່ວແຜ່ນໃນການໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ສໍາລັບຫ້ອຍສິ່ງ. ຈັດເກັບລາຍການ ຮັກສາການຈັດຕັ້ງ ແລະປະຫຍັດພື້ນທີ່ໃນຫ້ອງ. ຊຶ່ງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຈັດເກັບສິ່ງຕ່າງໆ. ອຸປະກອນເຮືອນຄົວທັງສອງ. ເຄື່ອງມື ລວມທັງເຄື່ອງຂຽນ. Same ບາງຄົນບໍ່ໄດ້ຕົກແຕ່ງຫຍັງອີກ. ປ່ອຍໃຫ້ມັນເປັນດິບ ເພື່ອຮັກສາເອກະລັກຂອງຕົນຂອງອຸດສາຫະກໍາມັນເຢັນ, ໃນຂະນະທີ່ບາງການຕົກແຕ່ງທາສີແລະ decorated ກັບພືດປະດັບທີ່ສວຍງາມ. ການນໍາໃຊ້ສີຂອງ Pegboard ເຮັດໃຫ້ມັນເບິ່ງງາມເຊັ່ນກັນ. ມັນກໍ່ກາຍເປັນເຮືອນທີ່ສວຍງາມ. ຢູ່ກັບຂ້ອຍແລ້ວCHANCON PROFILE / CHANNON PRODUCTS ຜູ້ຜະລິດຄຸນສົມບັດ Channel ຜູ້ຊ່ຽວຊານກໍາແພງການຄວບຄຸມຫມູ່ຄະນະໂລຫະ pegboard ແລະ slotted ເປັນຫມູ່ຄະນະຄະນະກໍາມະເຄື່ອງມືແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດໃນລະດັບໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບການເກັບຮັກສາເຄື່ອງມື pegboard ແລະອົງການຈັດຕັ້ງ. Wall Control pegboard separates ຕົວຂອງມັນເອງຈາກການແຂ່ງຂັນໂດຍການເປັນດີກວ່າໃນຄວາມທົນທານ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມຄ່ອງຕົວ. ສະດວກໃນການຕິດຕັ້ງ, ແລະຮູບລັກສະນະ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດແນວໃດ Wall ຄວບຄຸມຫມູ່ຄະນະ pegboard ສະເຫນີການເກັບຮັກສາເຄື່ອງມື pegboard ດີກວ່າ, ແຕ່ pegboards ເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງນີ້ໃນມູນຄ່າທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ໂດຍໃຊ້ເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ໄປຫາຮ້ານແລະຊື້ທັງຫມົດຂອງໂຄງຮ່າງການ, ຮາດແວ, ແລະອຸປະກອນທີ່. ຈໍາເປັນໃນການວາງສາຍ ugly, masonite ອາຍຸຫລືແຜ່ນ pegboard ຢາງທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການສໍາເລັດການຕິດຕັ້ງ pegboard Wall ຄວບຄຸມຂອງທ່ານແລະມີແນວໂນ້ມວ່າການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຫນ້ອຍເນື່ອງຈາກວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຖືກຕ້ອງໃນຫ້ອງດັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກຄວາມສະດວກເຫຼົ່ານີ້ ,.ມີກໍາແພງຫີນ Wall Control ທ່ານຈະມີ pegboard ທີ່ຖືກອອກແບບແລະຮັບປະກັນໃຫ້ມີຊີວິດຕະຫຼອດຊີວິດດັ່ງນັ້ນມັນຈະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປ່ຽນແທນ.
ເຫຼົ່ານີ້ທີ່ດຶງດູດ, ແລະ scratch ທົນທານ, ຫມູ່ຄະນະ pegboard ເຮັດວຽກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນ garage, ຮ້ານຄ້າ, ເຮືອນຄົວ, ຫ້ອງການ, closet, ຫຼືຫ້ອງຫັດຖະກໍາ. ຂໍຂອບໃຈກັບການຄວບຄຸມ Wall Controls modular pegboard, ທ່ານສາມາດຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ການເກັບຮັກສາຂອງທ່ານເປັນເວລາແລະງົບປະມານອະນຸຍາດໃຫ້. ຕາຕະລາງ pegboard ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງດຽວຫຼືຖືກນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັບຊຸດມູນຄ່າທີ່ຖືກຫຸ້ມຫໍ່ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງມີກະດານພິເສດຈໍານວນຫນ້ອຍເພື່ອເຮັດສໍາເລັດພື້ນທີ່.
ຮາດແວ Hanger ມາຢູ່ໃນຫຼາຍຮູບແບບແລະຂະຫນາດ, ຈາກພື້ນຖານ U, L ສໍາລັບການ hanging ເຄື່ອງມືດຽວກັບ hangers ສອງທ່ອນສໍາລັບ hammers ແລະມາດຕະຖານເຖິງ shelf. ທ່ານສາມາດຊື້ hangers ປະເພດຕ່າງໆໃນຫຼັກຊັບຫຼືຫຼັກຊັບທີ່ຂຶ້ນກັບປະເພດທີ່ທ່ານມັກຈະໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຈັດກິດຈະກໍາໃດໆທີ່ມີ Pegboard: ຄວາມຄິດແລະຄໍາແນະນໍາ Pegboard ແມ່ນຢູ່ທົ່ວທຸກບ່ອນ – ຕາຕະລາງ, hooks, doodads, ທ່ານຊື່ມັນ. ທຸກເຄື່ອງມືໃນຮ້ານຮາດແວແມ່ນຫ້ອຍຢູ່ເທິງປອກເປືອກ. ທຸກໆຖົງໂລຫະ, ຖົງ tape ແລະເຕັກໂນໂລຢີຂອງ Tic Tacs ຢູ່ທີ່ checkout counter-pegboarded. ແມ້ກະເບື້ອງ pegboard hang ສຸດ hook pegboard. ແຕ່ວ່າມັນຄວນຈະບໍ່ແປກໃຈເລີຍ. ຮ້ານຄ້າປີກຕ້ອງການລະບົບການສະແດງທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ງ່າຍຕໍ່ການຈັດການແລະປັບປ່ຽນ – ຄຸນລັກສະນະດຽວກັນທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງທ່ານຢູ່ເຮືອນ. ຫົວຫນ້າໄດ້ຫັນເປັນສີເຫຼືອງ Crafty, ຫ້ອງການຈັດແຈງຈັດແຈງ, ນ້ໍາເຄື່ອງຊັກຜ້າຫ້ອງ, ສິນລະປະກໍາແພງຫີນ,Pegboard ຊ່ອງເກັບຂອງ, pegboard ໃນ shelf pegboard ຂອງສະແດງຄົ້ນຫາ Peg Board Hooks, Panel pegboard, ແບບລວດກະຕ່າໄດ້ Peg ຄົ້ນຫາ Board ຈັດກັບສໍາລັບ pegboard ໂລຫະ pegboard ອຸປະກອນເສີມ Hook ໄດ້, ວັນນະຄະດີແລະຖືວັດສະດຸ Nylon Hooks, ຊັ້ນວາງ, ກ້າ Wicker ໃນ shelf Brackets ເຊົ້າ Panels Panel
ເວລາມັນ JobsDB.com ຂອງການຝຸ່ນ Off ວ່າ pegboard ໄດ້ຈາກ The Garage ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບເຮັດກຽມພ້ອມສໍາລັບ A ຍີ່ຫໍ້ໃຫມ່. ຊີວິດໃນເຮືອນ. ຈາກພື້ນທີ່ເຮັດວຽກອົງການຈັດຕັ້ງເພື່ອການຕົກແຕ່ງສວນກ້າ, pegboards ມີຄວາມຄ້າຍຄືພີ່ນ້ອງຂອງເປີດເກັບເຂົ້າລິ້ນຊັກ, ແຕ່ເປັນພຽງເລັກນ້ອຍຫຼາຍ eclectic ແລະຫຼິ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, pegboards ບໍ່ຢຸດຢູ່ທີ່ເຄື່ອງມືອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່; ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດສວຍງາມ darn stylish ເກີນໄປ. ທີ່ມີສີແລະການອອກແບບບາງຢ່າງເຮັດວຽກ, ເຫຼົ່ານີ້ 17 ຄວາມຄິດ pegboard DIY ໄດ້ຍົກລະດັບການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງມື garage ມາດຕະຖານເຂົ້າໄປໃນສະຫງ່າງາມ, ລະບົບການຈັດຕັ້ງ minimalist ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫ້ອງຂອງເຮືອນທຸກ.
1. ເຮັດໃຫ້ມັນເຂົ້າໄປໃນສິລະປະ: ເອົາຮູທີ່ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ກັບການຕັດທຽນຫີນທີ່ມີສີສັນຂອງບາງສິ່ງບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ດອກໄມ້ໃຫຍ່ຫຼືຮູບແບບເລຂາຄະນິດ. (
ຈັດຕັ້ງຫ້ອງໂຖປັດສະວະ: ແທນທີ່ຈະແລ່ນເຂົ້າໄປຕາມຄົນທີ່ໂງ່ໃນເວລາທີ່ທ່ານກໍາລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະອອກຈາກປະຕູ, ໃຫ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກແລະກຽມພ້ອມສໍາລັບທ່ານທີ່ຈະຂີ່ແລະຂີ້ເຫຍື້ອ. ຕົວເລືອກການເກັບຮັກສາ pegboard ເປັນພື້ນທີ່ທີ່ດີທີ່ທ່ານສາມາດຮັກສາສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນທັງຫມົດເຊັ່ນ: ຄີ, ແວ່ນຕາກັນແດດແລະຖົງຂອງທ່ານທັງຫມົດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສະດວກ. (ໂດຍຜ່ານ The Merrythought)
3. ອອກແບບ Desk: ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນຫ້ອງ IKEA, pegboard ແລະ rack ເຄື່ອງເທດທີ່ມີບາງ mint ແລະສີສີຊົມພູສໍາລັບ desk cutest ເຄີຍ. ພວກເຮົາຮັກຄວາມຄິດຂອງການນໍາໃຊ້ rack ເຄື່ອງເທດເພື່ອເກັບຮັກສາປື້ມບັນທຶກ pretty. (ຜ່ານ Petit ແລະ Small)
4. ໃນຖານະເປັນຕາຕະລາງຂ້າງຄຽງ: ທ່ານອາດຈະຢູ່ໃນຫ້ອງນອນແລະບໍ່ມີໂຕະ, ແຕ່ວ່າທ່ານອາດມີຕາຕະລາງແຕ່ວ່າທ່ານຍັງຕ້ອງການເກັບຮັກສາເພີ່ມເຕີມ. pegboard ສາມາດເປັນວິທີທີ່ສະຫນຸກສະຫນານແລະບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງທີ່ຈະນໍາເອົາການເກັບຮັກສາຕັ້ງ. ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສິ້ນຂອງສິນລະປະໂດຍການເພີ່ມຕົ້ນໄມ້ແລະຮູບພາບບາງຮູບຂອບ, ແລະ hanging pretty bling ຂອງທ່ານຈາກ hooks. (ຜ່ານບ້ານເຮືອນແລະສວນທີ່ດີກວ່າ)
5. ກາເຟ Nook: ຖ້າທ່ານມີຊຸດຖ້ວຍທີ່ສວຍງາມ (ແລະບໍ່ແມ່ນໃຜ), ຕັ້ງເຄື່ອງສະແດງເລັກໆນ້ອຍໆກັບ pegboard ແລະ hooks ຫຼາຍກວ່າຮ້ານກາເຟ mini ແລະຊາ. (ຜ່ານ The Cupboard ສີຂຽວ)
6. ການເກັບຮັກສາເຮືອນຄົວຂະຫນາດນ້ອຍບາງບ່ອນກໍມີເຮືອນຄົວຂະຫນາດນ້ອຍ ສາມາດຈະ struggle ໃນເວລາທີ່ cupboards ສຽງປັ້ງເປັນເຊິ່ງກັນແລະກັນແລະ drawers ບໍ່ດຶງທຸກວິທີທາງອອກ. ແທນທີ່ຈະຂຸດຜ່ານ drawers ທັງຫມົດເຫຼົ່ານັ້ນ, ວາງສາຍ pegboard ເພື່ອຮັກສາອຸປະກອນເຮັດແລະ utensils ການຈັດຕັ້ງແລະສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍສໍາລັບການນໍາໃຊ້ປະຈໍາວັນໄດ້. (Via ໂຮງກັ່ນ 29)
7. In The Garden ແມ່ນວິທີການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນ JobsDB.com :: ສໍາລັບພີ່ນ້ອງທີ່ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອ A ຂະຫນາດນ້ອຍ ons ລະບຽງສວນ, ການ pegboard A ສາມາດເປັນວິທີທີ່ດີເພື່ອເພີ່ມ, ຕັ້ງ, ປູກ. ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານທາສີຈັບແມວນ້ໍາບາງຢ່າງກ່ຽວກັບມັນ ສະນັ້ນມັນບໍ່ເນົ່າເປື່ອຍໃນສະພາບອາກາດ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນມີຄວາມມ່ວນ painting ການ pots ແລະ pegboard ເພື່ອສ້າງປ່າໃນຕົວເມືອງ pretty. (ຜ່ານທາງການປິ່ນປົວແບບອະເນກປະສົງ)
8. ໃນສວນກ້າ: ພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າມັນເປັນການປ່ຽນແປງຕາຕະລາງບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າການສະແດງຜ້າອ້ອມບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມງາມໄດ້. ສິ່ງທີ່ມ່ວນຊື່ນກ່ຽວກັບ pegboard ແມ່ນວ່າທ່ານສາມາດວາງຮູບແຕ້ມທີ່ຫນ້າຮັກງາມແລະຕ່ອນອອກແບບຢູ່ຄຽງຄູ່ກັບຕ່ອນປະຕິບັດຫຼາຍ. (ຜ່ານ White and Gold)
9. ເປັນ Headboard: ເອົາປອກເປືອກໄປໃນລະດັບຕໍ່ໄປໂດຍການສ້າງກະດານຫົວຫນ້າທີ່ມີປະເພດຫນຶ່ງ. ແຕ້ມມັນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫ້ອງ, ເສັ້ນໄຍຫຼືເສັ້ນໄຍຜ່ານຮູຫຼືສີຮູບແບບເລຂາຄະນິດທີ່ມັກ. 10. ເປັນຫໍສະມຸດຮູບແກະສະຫຼັກ: ຕິດຕັ້ງກະດານໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຕຽງນອນຂອງທ່ານຫຼືຢູ່ຫລັງຫ້ອງນອນແລະນໍາໃຊ້ມັນເປັນກໍາແພງຫີນ. ມັນເປັນທີ່ດີເລີດສໍາລັບຄໍາຫມັ້ນສັນຍາ, phobe ຜູ້ທີ່ມັກຫຼີ້ນກັບຮູບລັກຂອງກໍາແພງຫີນຂອງເຂົາເຈົ້າ.11. ເຊື່ອງມັນຢູ່ໃນບ່ອນນັ່ງ: ເນື່ອງຈາກ pegboards ແມ່ນຮາບພຽງ, ທ່ານສາມາດປັບໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ເກືອບທຸກບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ລວມທັງປະຕູສໍາລັບການເກັບຮັກສາເພີ່ມເຕີມໃນ closet ຫຼື pantry. ເມື່ອທ່ານໃຊ້ມັນພ້ອມກັບໄຟລ໌, ກະຕ່າແລະເຄື່ອງມືການເກັບຮັກສາອື່ນໆ, ທ່ານມີຕົວເລືອກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຈໍາກັດ. (ຜ່ານທີ່ບ້ານແລະສວນທີ່ດີກວ່າ)
12. ເປັນແຖບອາຫານ: ເຮັດໃຫ້ເປກເກີນອນຕາມລວງນອນແລະນໍາໃຊ້ໄມ້ທີ່ເປັນໄມ້ທີ່ຍ້າຍໄດ້ເພື່ອສ້າງອາຫານທີ່ກໍາຫນົດເອງຫຼືເກັບມັດໄວ້. ອົງການຈັດຕັ້ງ pegboard ໃນ drawer ເຮັດໃຫ້ drawer ຂອງທ່ານ chaos ຟຣີແລະເຮັດໃຫ້ທ່ານ (ຫຼືຜູ້ຊ່ວຍເຮືອນຄົວພຽງເລັກນ້ອຍ) ຈາກການຍົກ piles ຫນັກຂອງອາຫານເຂົ້າໄປໃນຕູ້ສູງ. (ຜ່ານບ້ານທີ່ດີກວ່າແລະສວນ)
13. ສະຫນອງ Shelves: ພວກເຮົາມີຄວາມສົງໃສຫນ້ອຍທີ່ສຸດກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ, ແຕ່ພວກເຮົາຮັກປະໂຫຍກຂອງປະຕິທິນ clipboard ຫຼືປື້ມປະກອບຊີວິດຈິງໆທີ່ຫ້ອຍຢູ່ໃນຫ້ອງຊ່າງຫຼືຫ້ອງການເຮືອນ. 14. ສະແດງການເກັບກໍາ: ທີ່ນີ້, pegboard ແມ່ນນໍາໃຊ້ເພື່ອສະແດງການເກັບກໍາ Rock, ແຕ່ວ່າທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ມັນສໍາລັບການ trinkets ທີ່ທ່ານມີຫຼາຍ. ມັນເປັນວິທີທີ່ງ່າຍດາຍແລະມ່ວນຊື່ນທີ່ຈະສະແດງອອກສິ່ງເລັກໆນ້ອຍໆທີ່ທ່ານຮັກເພື່ອເບິ່ງ.
Pegboard Peg Board Display Panel ຊ່ອງເກັບຂອງຕູ້ເອກະສານ Shelf ການເກັບຮັກສາຈັດມຸມ Pegboard Hooks ແລະ J Pegboard Hooks Pegboard Hat ສະແດງແລະ Pegboard Cap ສະແດງ Super Duty Pegboard Hooks Slatbox Pegboard Display ຊ່ອງເກັບ Pegboard ເສື້ອຜ້າຄວບຄຸມແບບຟອມ Pegboard ເຄື່ອງມືສະແດງ Pegboard Acrylic ຊ່ອງເກັບ Pegboard ຜູ້ຖືບັດແລະ Pegboard ເຂົ້າສູ່ລະບົບຜູ້ຖື Pegboard ຊັ້ນ. ການຕິດຕັ້ງຈໍສະແດງຜົນທີ່ອຸປະກອນການໃນ pegboard Specialty pegboard ແດງໄດ້ – ມີເຫລັກຫຸ້ມເປັນກັບຄືນໄປບ່ອນການ pegboard pegboard ອຸປະກອນການພິເສດຄໍາສັ່ງ Shelves pegboard ສາມາດເພີ່ມ, ອົງການຈັດຕັ້ງການຫນ້າທໍາອິດຂອງທ່ານ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານເຮັດໃຫ້ shelves ຂອງທ່ານເອງ, ທ່ານ ສາມາດສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກັບສິ່ງໃດກໍຕາມຂະຫນາດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. A ເຫມາະ custom ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ໃນສະຖານທີ່ໃນບ້ານຫລືກອງປະຊຸມຂອງທ່ານໃດ.
ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດແນວໃດ pegboard? ຂຸມທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຮັບເອົາຂີ້ເຫຍື້ອຫຼື hooks ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນລາຍການຕ່າງໆເຊັ່ນເຄື່ອງມືໃນກອງປະຊຸມ. Pegboard ແມ່ນຊື່ຂອງຜະລິດຕະພັນນີ້ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນໄລຍະທົ່ວໄປສໍາລັບແຜ່ນເກັບຂໍ້ມູນທີ່ເຮັດດ້ວຍແຜ່ນແຂງ, ໄມ້, ໂລຫະຫຼືອຸປະກອນອື່ນໆ.
ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍສົນໃຈຕົ້ນຕໍແມ່ນງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງແລະຫຼຸດຜ່ອນພື້ນທີ່ສູນເສຍພື້ນທີ່. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ຫໍ່ Wrap-up + Shelf ໃນເຮືອນຄົວສໍາລັບຫ້ອງດໍາລົງຊີວິດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ sophisticated ຫຼາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າສະເຫມີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດວາງ peg ກັບການສະແດງຮ້ານ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມແຂໍງແຮງພໍທີ່ຈະຮອງຮັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຫນັກແຫນ້ນແຕ່ບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມສະຫງ່າງາມຫຼາຍ. ພວກເຮົາສົມມຸດວ່າການສົມມຸດຕິຖານໄດ້ຖືກພິສູດໂດຍລະບົບ Pegboard Shelving ນໍາສະເຫນີກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວດ້ວຍຕົວເມືອງ. ລະບົບນີ້ແມ່ນງ່າຍດາຍ intriguingly, yet graceful ແລະປະຕິບັດ. shelves ສາມາດໄດ້ຮັບການ configured ໃນຮູບແບບທີ່ຫຼາກຫຼາຍສະນັ້ນເຖິງແມ່ນວ່າຫນັງສືຂະຫນາດໃຫຍ່ອາດຈະເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມ. ແນ່ນອນ, ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ພຽງແຕ່ເປັນເຄື່ອງເຟີນີເຈີອອກແບບທີ່ມີ vases ດອກຫຼືເຟຣມກັບຮູບຖ່າຍ. ວິທີແກ້ໄຂອຸດສາຫະກໍາຫຼາຍກວ່າແລະຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງປະສົບຜົນສໍາເລັດຢູ່ເຮືອນ. ທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບການອຸດສະຫະກໍາຂອງເຮືອນນີ້?
ໃນເວລາທີ່ທ່ານຄິດກ່ຽວກັບ pegboards, ທ່ານອາດຈະຄິດກ່ຽວກັບ plywood ugly ແລະລະບົບອົງການຈັດຕັ້ງ hook ໂລຫະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຖືກຈັດຂື້ນໃນ garages ແລະ workshops. ນີ້ແມ່ນແບບງ່າຍດາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ pegboard ທີ່ມີເສັ້ນດ່າງທີ່ດຶງດູດເອົາພຽງພໍສໍາລັບຫ້ອງຂອງເຮືອນໃດກໍ່ຕາມ. ຄົນທີ່ຢູ່ໃນການປິ່ນປົວແບບອະທິບາຍສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວິທີການນີ້. ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າເຖິງບາງເຄື່ອງມືພະລັງງານຂັ້ນພື້ນຖານ, ເຊັ່ນ: ການເຈາະແລະເຄື່ອງຈັກ, ແຕ່ຂະບວນການນີ້ແມ່ນງ່າຍດາຍ. ຕັດ backboard ກັບຂະຫນາດທີ່ຕ້ອງການຂອງມັນ. ການວັດແທກຊ່ອງຫວ່າງສໍາລັບຮູຂຸມເຈາະຂອງທ່ານແລະຂຸດພວກມັນອອກເພື່ອຂະຫຍາຍຂະຫນາດຂອງເຄື່ອງມືຂອງທ່ານ. ຕັດແຫວນທີ່ຍາວແລະປະກອບຄະນະຂອງທ່ານ. ແລະແນ່ນອນ, ທ່ານບໍ່ຈໍາກັດກັບຮູບສີ່ແຈສາກທີ່ງ່າຍດາຍ. ທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ເຫມາະສົມກັບສະຖານທີ່ໃດກໍ່ຕາມທ່ານມີຫຼືສ້າງຮູບຮ່າງທີ່ມ່ວນຊື່ນໃນຫົວໃຈຂອງທ່ານ. ແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການ DIY: ວິທີການສ້າງລະບົບປ້າຍໂຄສະນາແບບ Pegboard ທີ່ທັນສະໄຫມ
Pegboards ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງເຄື່ອງມືທີ່ມີປະໂຫຍດ – ທຸກຄົນຮູ້ນີ້. ແຕ່ພວກເຂົາສາມາດຖືຫຼາຍກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ. ນີ້ແມ່ນການກໍ່ສ້າງຊັ້ນວາງລູກຄ້າແລະຜູ້ຖືເຄື່ອງມືທີ່ຈະຂະຫຍາຍການເຮັດວຽກຂອງ pegboard ຂອງທ່ານ. ການນໍາໃຊ້ກະດານຕັດແລະ screws ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອງມືໃນຫ້ອຍ 15 ນາທີ. ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງມີເຄື່ອງຕັດເພື່ອຕັດຂອບຂອງທ່ານໃຫ້ຄວາມຍາວທີ່ຕ້ອງການ, ແລະການເຈາະຮູທີ່ຂ້ອນຂ້າງລ່ວງຫນ້າ, ແລະຍົນເຈາະ. ການຕັດເປືອກຫີນທີ່ຢູ່ດ້ານເທິງໃນຂອບຂອງຄະນະກໍາມະການຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຕິດຕັ້ງມັນໄດ້ງ່າຍກັບ pegboard. ຮາດແວ Pegboard, ກະດານ Pegboard & ອຸປະກອນເສີມ PEGBOARD Wall Peg ກະດານກະດານ Garage Storage Organizer Pegboard Bins Tool Steel
ເຮັດໃຫ້ pegboards ແລະຫນ່ວຍງານໂລຫະ gondola ຂອງທ່ານເຮັດວຽກປະສິດທິພາບມີການເລື່ອກສານຂອງພວກເຮົາສໍາເລັດຂອງ faceouts, hooks ຄະນະກໍາມະ peg, shelves ຮ້ານ, ແລະການສະແດງຂາຍຍ່ອຍທັງຫມົດອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອສ້າງການສະແດງຜະລິດຕະພັນທີ່ສວຍງາມ. Store Supply Warehouse ມີກະຕ່າ pegboard ທັງຫມົດແລະເຄື່ອງມື pegboard ອື່ນໆໃນຫຼັກຊັບແລະມີການຂົນສົ່ງທັນທີໃນຄໍາສັ່ງທີ່ຖືກຈັດໃສ່ກ່ອນທີ່ 3pm. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຮ້ານຄ້າອື່ນໆຂອງຊັ້ນວາງອື່ນໆທີ່ມີ hooks. ໃຫ້ພວກເຮົາຊ່ວຍທ່ານໃນການອອກແບບທຸກສະແດງການຕິດຕັ້ງຮ້ານທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ສິນຄ້າຂອງທ່ານຖືກຕ້ອງ!
ພວກເຮົາຜະລິດ B ທີ່ມີການສ້ອມແປງທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ທ່ານຈະພົບເຫັນທາງເລືອກຫຼາຍທີ່ນີ້. ເປັນຜູ້ອອກແບບພິເສດແລະຜູ້ຜະລິດຂອງບໍ ລະບົບ, ພວກເຮົາຍັງສະຫນອງ racks Pallet, racking ຫນັກ, ແສງສະຫວ່າງ, ຍົກເວັ້ນພາສີເກັບເຂົ້າລິ້ນຊັກ, ກາງຍົກເວັ້ນພາສີເກັບເຂົ້າລິ້ນຊັກ A, Cantilever Racking, Drawer Racking, Mezzanine Racking, FIFO roller racking, ພື້ນລະບຽງສາຍ, ຮົ້ວລວດຕາຂ່າຍ. ອະເນກປະສົງ pegBoard ເກັບເຂົ້າລິ້ນຊັກໃນຫລາຍຂະຫນາດ ແລະສີ. ຫລາຍພັນການນໍາໃຊ້. ທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບໂຮງງານຜະລິດ, ກອງປະຊຸມ, garages, ພື້ນທີ່ສະແດງ, ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍແລະອື່ນໆອີກ. PegBoard | SlatWall | ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ | Shelving | Mouldings | Wainscoting | ໂລຫະໂດຍສິ້ນ | Impact Protection | Door Hardware Systems | Magnetic Board | FreeStanding ສະແດງລາຍການທີ່ກໍາຫນົດເອງ Kits & Bundles | Fasteners | Wall Organizers | Wine Rack | Scratch & Dent Specials
သိုလှောင် Tools များ DIY Kit ယူပြီးဖောက်ထား Pegboard Hook စင်ပေါ် Winnipeg ဘုတ်အဖွဲ့ perforated သံမဏိမြို့ရိုးကိုသိုလှောင်မှု tools တွေကိုချိတ်ဆွဲပျဉ်ပြား။ bracket Hook Hook
Pegboard ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ # ဘုတ်အဖွဲ့စာရွက်များ, လူမီနီယမ်, သံမဏိ, သစ်သား။ မြို့ရိုးကိုအလှဆင်စက်ရုံ-စတိုင်မီးဖိုချောင်, သံမဏိစင်ပေါ် Pegboard Display ကိုချိတ်စင်ကြိုးကွင်း Store မှာ Tools များ Organizing တပ်ဆင်ထားစက်မှုဇုန်, #, တွင်းဖွဲ့စည်း # သစ်သားပျဉ်ပြားသံမဏိစာရွက်ထဲမှာအပေါက်။ နံရံ Tools များ Holder သိုလှောင်ဆင်ခက်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ဆွဲထားဘို့စားသုံးသူကုန်ပစ္စည်းများ။
ကိုးကား Billboard ချိတ် Pegboards နှင့်ချိတ်စျေးနှုန်းဆွဲထားခြေထောက်နှင့်အတူလာကြတယ်စက်ဆွဲထား panel ကသိုလှောင်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ, အကြံအဖန်တွေချည်းအိမ်သူအိမ်သားဆွဲထားတံစို့ဘုတ်အဖွဲ့ဖောက်ထားသောမြို့ရိုးတပ်ဆင်ထား1) စံနဲ့ Big Size: Billboard လာကြတယ် tools တွေဆွဲထား။ အထူးကြီးမားစံချိန်စံညွှန်းများအဘို့ဒီဇိုင်းလုပ်ခဲ့တာပါ။ ။ 50 x ကို 50-400cm မှကြီးစွာသောစတိုင်ကြီးမားသော panel ကိုအရွယ်အစားပေါင်းစပ်ဖို့က x 100-400cm 100 အစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ် ။ ဒါမှမဟုတ်တစ်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းကိုဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ သို့မဟုတ်ပိရမစ် သို့သော်ပုံရိပ်တွေဒီဇိုင်း
2) အထွေထွေ Hook လျှောက်ထား: လက်ကမ်းစာစောင်များပစ္စည်းကိရိယာများဆွဲထားဘို့အပေါက်တစ်ပေါက်ဖွဲ့စည်း။ ချက်ချင်းဈေးကွက်ထဲမှာတစ်ဦးကာစရာကုလားကာငါးမျှားအရွယ်အစားနှင့်အတူအသုံးပြုနိုင်ဖို့စီစဉ်ထုတ်လုပ်ထား။ ဝန်အမြင့် စင်အသုံးပြုခြင်းအားခက်ခဲတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အပိုအထူ၏
3) Made-to-မိန့် ( ရုပ်ဝတ္ထု / အရောင် / Size ကို): အမိန့်။ သည်အခြားအရောင်များ (အဖြူအနက်ရောင်, အဝါရောင်, အနီရောင်, အစိမ်း, အပြာ) သို့မဟုတ်ပစ္စည်းများ (သံမဏိ, လူမီနီယမ်) သို့မဟုတ်စံအရွယ်အစားထက်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစား။ အဘို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောင်းအားကိုဆက်သွယ်ပါ
4) High-Tech မှထုတ်လုပ်မှု: Peggy ဘုတ်အဖွဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ကိုလက်စသတ်။ အဲဒါကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အနားကျော်ခေါက်ဖို့ဒီဇိုင်း။ ချွန်ထက်ဖြတ်ခြင်းနှင့်အဆင်းလှသောရုပျပုံသို့သူတို့ကိုငါ paste လုပ်ထားတဲ့မရှိပါ။ သုံးစွဲဖို့ကဘေးကင်းလုံခြုံအောင် အခန်းအလှဆင်ဖို့ကိုသုံးပါ အဆင်းလှသောအမိန့်များနှင့်စုဆောင်းခြင်း
မြှင့်တင်ရေးပက်ကေ့ “+ pegboard ချိတ်,”: အဆိုပါအရောင်း
ဘုတ်အဖွဲ့အရွယ်အစားလျှော့ချဖို့ကတော့ Big တံစို့ pegboard အလို့ငှာဘုတ်အဖွဲ့ကနေမှာရန်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ တစ်ဦးချင်းစီဧရိယာမှ
#HooksPegboard လျှောက်လွှာ # Hook နှင့်ကွင်းပိတ် Hook ပျဉ်ပျဉ်ပြား Winnipeg ။ ရည်ရွယ်ချက်ဆွဲထား #PegBoardHook Accesories # Hook ချိတ်ဝါယာကြိုးခြေထောက်။ သံမဏိစင်ပေါ်တပ်ဆင်ထားကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်သောဆောင်းပါးများ။ # ဟှတျချဝါယာကြိုးကာစရာကုလားကာလက်မောင်းကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းမြို့ရိုးကိုသံလမ်းတွင်းရယူပါ။ #PegboardAccessories
သတ္တုသံမဏိသံက Black နှင့်အထူးအရောင် coated PegBoard | Peggy ပျဉ်ပျဉ်ပြား။ အနက်ရောင်အရောင်နဲ့ခြွင်းချက်အတွက် coated သံမဏိအရည်အသွေးကို။
high-Tech မှထုတ်လုပ်မှု: Peggy ဘုတ်အဖွဲ့ဘုတ်အဖွဲ့သံမဏိ, အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များ coated ။ အဲဒါကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အနားကျော်ခေါက်ဖို့ဒီဇိုင်း။ အဘယ်သူမျှမဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်း အဆင်းလှသောရုပျပုံအတူတူထားပါ။ သုံးစွဲဖို့ကဘေးကင်းလုံခြုံအောင် အမျိုးမျိုးသောခန်းကိုအလှဆင်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါသပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့လှပတဲ့အိမ်ရာများကိုစောင့်ရှောက်ရန်အသုံးပြုသည်
ဒီဇိုင်းသံမဏိတန်းနှင့်အပေါ်ယံပိုင်းအရည်အသွေးလုပ်ရမည်: ချေး Resistance ။ သံမဏိ, အခြေအနေများအမျိုးမျိုးအတွက်ပေါ့ပါးအကြမ်းခံအသုံးပြုမှု, ပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပနှစ်ဦးစလုံးခုခံ, ခရမ်းလွန်ခုခံ, ကောင်းသောအပူထက် anti-ချေးဂုဏ်သတ္တိများ။ ကွေးဖို့မခဲယဉ်း။ ဖောက်သည်ကိုအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုရနိုင်အောင်ထုတ်လုပ်မှု၏တိုင်းခြေလှမ်းကျနော်တို့အာရုံစိုက်။ အရည်အသွေးအာမခံချက်, ဖောက်သည်များမတိုင်မီသက်သေပြရမယ်
Pegboard Size: ရှိနိုင်စံအရွယ်အစား packages များဖြစ်သည်။ နှင့်အခြားသောအမိန့်ရှိ
1) Woodstock နှစ်ခုစံအရွယ်အစားအဘို့အဆင်သင့် 50 x ကို 50 စင်တီမီတာ။ နှင့်။50 x ကိုက 100 စင်တီမီတာ။ အတူတူရောက်စေဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ , ရှည်လျားထိုသို့သောဖြောင့်, ထောင့်ဖြတ်။ အဖြစ်အရွယ်အစား 100x100cm ။ , 50x150cm ။ , 100x200cm ။ , 200x200cm ။ စသည်တို့ကို
2) အခြားအရွယ်အစားထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ လုပ်-to-အမိန့် 100 ကိုက x ။ တက်ကြွစွာဧရိယာ 50 x ကို 150 စင်တီမီတာအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့ခံရဖို့ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီ, အကိုအခြားအရွယ်အစား။
လုပ်-to-မိန့် (ရုပ်ဝတ္ထု /coated ဘုတ်အဖွဲ့ MPEG-ဘုတ်အဖွဲ့အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိထုတ်ကုန်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဖောက်သည်ကိုချက်ချင်းဖြန့်ဝေဘို့စတော့ရှယ်ယာအတွက်ရရှိနိုင်။ အမိန့် သည်အခြားအရောင်များကိုစံအရွယ်အစားထက် (အနီ, အဝါ, အပြာ, အဖြူ) ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစား။ အဘို့ ရောင်းအားကိုဆက်သွယ်ပါ ပိုမိုသိရှိလိုပါက
Peggy ဘုတ်အဖွဲ့ Ultra-အရည်အသွေးမြင့်နှင့်အတူ coated စာရွက်သံမဏိ, အထူ 1.2 မီလီမီတာ၏လုပ်လာကြတယ်စာရွက်သတ္တုသိုလှောင်မှုထုတ်ကုန်ဆွဲထား။ ဒါဟာကွေးခွန်အားနှင့်အရောင်အပေါ်ယံပိုင်းတကယ်တော့မရှိသေးပေလွယ်ကူစွာချွတ်လက်သည်းမထားဘူး။ long ကတစ်သက်တာ
ဖောက်ထား လူမီနီယမ် pegboardအထူး # ပျဉ်ပြားပျဉ်ပြား Winnipeg လူမီနီယံဖောက်ထားသောမြို့ရိုးဆွဲထားသိုလှောင်မှုနောက်ဆုံးပေါ်! အဘယ်သူမျှမကအခြားကဲ့သို့အလူမီနီယံနဲ့လုပ်ထားတဲ့ Pegboard ပြား။ ကမ်ဘာပျေါမှာအကောင်းဆုံးအရည်အသွေး။ ပစ္စည်းကြေးဝါ, ငွေ, တောက်ပအရောင်ရှိပြီးလှပသောအလင်းလ်တာအမြဲအတွင်းအပြင်နှင့်ထဲကနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးအခွအေနကိုဆီးတားဖို့ကြွပ်ဆတ်မရသံချေးချေးအဘို့တစ်သက်တာအာမခံ, 1. Pegboard ပစ္စည်း: ။ ဘုတ်တံစို့ဘုတ်အဖွဲ့လူမီနီယမ်-ချောပစ္စည်းများကိုလူမီနီယမ်တန်း A1100, High-အရည်အသွေး, အထူ 1.5 မီလီမီတာအေ နှစ်မျိုး၏မျက်နှာပြင် (မျက်နှာပြင်):
1) ရတဲ့အရာတွေ pegboard: ကြေးဝါ, ငွေ, တောက်ပမျက်နှာပြင်တောက်ပြောင်
2) ဆံပင်လိုင်း pegboard:အဆိုပါပန်းကန်န်းကျင်ကြေးဝါ, ငွေမှုန်သော Laikad 2. pegboard Size ကို :.အဆင်သင့်စံအရွယ်အစားအတွက်သာရရှိနိုင် ထိုအမိန့်
ဟာ standard size ကိုအတူနှစ်ယောက် 1) Woodstock 50 x ကို 50 စင်တီမီတာ။ပြီးတော့ 50 x ကိုက 100 စင်တီမီတာ။ အတူတူရောက်စေဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ , ရှည်လျားထိုသို့သောဖြောင့်, ထောင့်ဖြတ်။ အဖြစ်အရွယ်အစား 100x100cm ။ , 50x150cm ။ , 100x200cm ။ , 200x200cm ။ စသည်တို့ကို
2) အခြားအရွယ်အစားထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ လုပ်-to-အမိန့် 100 ကိုက x ။ တက်ကြွစွာဧရိယာ 50 x ကို 150 စင်တီမီတာအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့ခံရဖို့ ကို 100 စင်တီမီတာ။ ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီ, အကိုအခြားအရွယ်အစား။
3. ချေး Resistance ကို အခြေအနေများအမျိုးမျိုးအတွက်ပေါ့ပါးအကြမ်းခံသုံးစွဲခြင်း, သံမဏိများကဲ့သို့ corrode, သံချေးမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုလူမီနီယမ်တန်းထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များလုပ်ခံရဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ, နှစ်ဦးစလုံးပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပခရမ်းလွန်အပူကိုဆီးတားဖို့တည်ငြိမ်။ ကောင်းသော ကွေးဖို့မခဲယဉ်း။ ဖောက်သည်ကိုအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုရနိုင်အောင်ထုတ်လုပ်မှု၏တိုင်းခြေလှမ်းကျနော်တို့အာရုံစိုက်။ ဖောက်သည်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီသက်သေပြရမယ်အရည်အသွေးအာမခံချက်,
4. အထွေထွေ Hook လျှောက်ထား: လက်ကမ်းစာစောင်များပစ္စည်းကိရိယာများဆွဲထားဘို့အပေါက်တစ်ပေါက်ဖွဲ့စည်း။ တစ်ဦးကာစရာကုလားကာငါးမျှားနှင့်အတူအသုံးပြုနိုင်ဖို့စီစဉ်ထုတ်လုပ်ထား။ ချက်ချင်းစံစီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင် ဝန်အမြင့် စင်အသုံးပြုခြင်းအားခက်ခဲတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုအထူကြောင့်
5. High-Tech မှထုတ်လုပ်မှု :.Peggy ဘုတ်အဖွဲ့ဘုတ်အဖွဲ့လူမီနီယမ်ကိုလက်စသတ်။ အဲဒါကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အနားကျော်ခေါက်ဖို့ဒီဇိုင်း။ အဘယ်သူမျှမဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်း အဆင်းလှသောရုပျပုံအတူတူထားပါ။ သုံးစွဲဖို့ကဘေးကင်းလုံခြုံအောင် အမျိုးမျိုးသောခန်းကိုအလှဆင်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အလွန်ပစ္စုပ္ပန်နှင့်လှပသောနေထိုင်ရာစုစည်းမှုနှင့်အသုံးပြုမှု
6. / အရောင် / Size ကို): ဘုတ်အဖွဲ့တံစို့ဘုတ်အဖွဲ့လူမီနီယံကိုလက်စသတ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဖောက်သည်ကိုချက်ချင်းဖြန့်ဝေဘို့စတော့ရှယ်ယာအတွက်ရရှိနိုင်။ အမိန့် သည်အခြားအရောင်များ (အဖြူရောင်, အနက်ရောင်, အပြာ, အဝါ, အနီ) သို့မဟုတ်ပစ္စည်းများ (သံမဏိ, လူမီနီယံ, Non-ပို့ကုန်တန်းကြိတ်) သို့မဟုတ်စံအရွယ်အစားထက်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစား။ ရောင်းအားကိုဆက်သွယ်ပါ ပိုမိုသိရှိလိုပါက
ဝါယာကြိုးချိတ် Pegboard ဘို့ကြိုးကွင်းဒီဇိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်း
များနှင့်ချိတ်ဆွဲထားခြေထောက် hooks တစ်ဖီပျဉ်ပျဉ်ပြားနှင့် တွဲဖက်. အသုံးပြုသည်။
ချိတ်, ချိတ်, ရည်ရွယ်ချက်ဆွဲထားချိတ်ဝါယာကြိုးခြေထောက်။ သံမဏိစင်ပေါ်တပ်ဆင်ထားကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်သောဆောင်းပါးများ။ ချိတ်ဝါယာကြိုးကာစရာကုလားကာလက်မောင်းကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းမြို့ရိုးကိုသံလမ်းတွင်း #HardBoard #Pegboard #Hooks #Shelf # # Peggy Peck ဘုတ်အဖွဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ pin ကို # # # SPC ဘုတ်အဖွဲ့ Winnipeg Winnipeg ဘုတ်အဖွဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ # # MPEG ပျဉ်ပျဉ်ပြားရ။ # သံမဏိပြားမြို့ရိုးကို perforated ။ # စာရွက်သတ္တုလာကြတယ် # # အမှတ်တရစင်ပေါ် # သံမဏိထိန်သိမ်းပစ္စည်းကိရိယာများ။ လေ့ကျင့်ခန်းအပေါက် # စာရွက်လူမီနီယံလာကြတယ်လက်ရှိဘုတ်အဖွဲ့ # စာရွက်များဆွဲထားကုန်ပစ္စည်းများ # Hook # Hook # ချိတ်ဝါယာကြိုးချိတ် # ကွင်းပိတ် # Hook ကွင်းပိတ် # Hook အပေါ် # Tools များ # Hook # ကွင်းပိတ် # ။ # Slat တွင်း # ပစ္စည်းများအမှတ်တရ Pegboard ဆက်စပ်ပစ္စည်းဘုတ်အဖွဲ့သို့ထိပ်တံစို့စွန်အဖျားကသူတို့ကို install လုပ်ပါ။ ချိတ်, ကြိုးကွင်း, ခြင်းတောင်းနှင့် tool ကိုကိုင်ဆောင်သူအမျိုးမျိုးအတွက်လာ, ပြီးတော့ဆင်းလှည့်။ Pegboard ကလွယ်ကူသည်ကတည်းကတို့သည်ကြီးစွာသော Workspace စည်းရုံးရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုမဆိုသင်လိုချင်သောလမ်းအတွက် configure ။ အထူးကြိုးကွင်းဝက်အူသေနတ်ကနေထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများသောင်မတင်မှအရာအားလုံးတို့အတွက်တည်ရှိ။
Pegboard ဟွတ်မူလစာမျက်နှာ Orgainzing Idea Features
မြို့ရိုးကိုအလှဆင် tools တွေဆွဲထားအကြံပြုချက်များ panel ကဘုတ်အဖွဲ့ဖောက်ထားသံမဏိနံရံ chic ဂန္နှင့်ခေတ်သစ်ကို formats ခနျး။
Pegboards Kit ပုံမှန် Functions များလျှောက်လွှာ Panel ကို Winnipeg ဘုတ်အဖွဲ့ perforated သံမဏိမြို့ရိုးကိုသိုလှောင်မှု tools တွေကိုဆွဲထားကြ၏။
Pegboard တစ်ပျဉ်-ဘုတ်အဖွဲ့ MPEG သံမဏိပြားများသိုလှောင်မှု tools များဆွဲထားသောမြို့ရိုး perforated ဖြစ်ပါတယ်။ လူမီနီယံ, သံမဏိတန်းအထပ်သားတင်ပို့မှု၏ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါပစ္စည်းအရည်အသွေးမြင့် TIS ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကွေးအစွမ်းသတ္တိကိုလှလှပပမဆိုအခန်း၏ပုံစံမျိုးအတွက်ဖွဲ့စည်းနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအိုး, အိုးအဖြစ်အပင်အတွက်အနုပညာအိမ်မှာကွန်ဒို, မီးဖိုချောင် ladle Turner တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်းတစ်ခန်းသို့မဟုတ်အိပ်ခန်းထဲမှာသံနှုတ်, ကတ်ကြေး, လိမ်ဖဲ့ခြင်း, လေ့ကျင့်ခန်းရှုး, ဝက်အူလှည့ဆွဲထားဖို့အသုံးပြုတဲ့ tools တွေကိုသိမ်းထားဖို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ , အဆင်တန်ဆာ, ပုတီး, လည်ဆွဲ, လက်ကောက်, နာရီ, scarves ဆွဲထားဦးထုပ်, မျက်မှန်, etc အဖြစ်အသုံးပြု #SportPegBoard ။ Peck ဘုတ်အဖွဲ့အားကစားနှင့်အတူနံရံအလှဆင်ဖို့အကြံပြုချက်များ။ #ShoesPegBoard မြို့ရိုးကိုဖိနပ်စတိုးဆိုင်ဆွဲထားဘို့ပျဉ်ပြား pack မှာ။ #LadyPegBoard ရိုးမင်းသမီးများအတွက်အလှဆင်အဆိုပါအိတ်ကပ်ဆွဲပြားလည်ဆွဲကျော်ဆွဲထားပျဉ်ပြား pack မှာ။
စုဆောင်းခဲ့ကြသမျှသောမိန်းကလေးငယ်များ, အိတ်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသင်တန်း၏ကြီးမားဖြစ်ကြသည်။ ထိုအခါပြဿနာကြောင့်သိုလှောင်မှုမျှဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်တစ်ရွက်မှာကြည့်ဖျက်သိမ်းဖို့အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ဤပြဿနာကိုအလွန်လွယ်ကူစွာဖြေရှင်းနိုင်သည်။ နံရံရှင်းလင်းသောခဲ့ကြသည်, ထိုအုတ်ရိုးသို့ fit မှမြုံတပ်ဆင်ထား pegboard ကစွန့်ခွာဘူး။ အခုတော့ကျွန်မရဲ့အိတ်ကပ်ကိုခံစားနိုင်ပြီး, အရာအတော်များများရှိပါတယ်အတွက်ဆွဲထားကြသည်, သို့မဟုတ်သင် pegboard မြို့ရိုးကို mounting ပန်းကန်တပ်ဆင်ရန်မလိုချင်ကြပါလျှင်သေးငယ်တဲ့အိတ်ကပ်ဒါမှမဟုတ်တော်တော်လေးမကြာခဏကျနော်တို့အသုံးပြုကြောင့်ချိတ်ဆွဲထားတယ်။#ToolsAccessoriesPegBoard tools တွေအဘို့ # ဘုတ်အဖွဲ့ Peck ဘုတ်အဖွဲ့သိုလှောင်မှု ဟာစားပွဲခုံအထက်မြို့ရိုးပေါ်မှာတပ်ဆင်ထား pegboard ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ လိုအပ်သကဲ့သို့သင်တို့အဘယျသို့အရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ကြဘူး။ အလွန်ကြီးစွာသောဓါတ်ပုံတစ်ပုံသို့မဟုတ်ကိုးကား planer ပေါ်သူတို့ကိုစမ်းပြီးတော့စာရေးကိရိယာသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အပြင်တော်တော်လေးကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ pegboard နှင့်အတူပရိဘောဂလာနှင့် ပို. ပင်အလုပ်မလုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်မှုဖန်တီးကူညီပေးခဲ့သည်။
Headboard, ရေထရံအခန်း Divide, အဝတ်လျှော်တဲ့အခန်းက Wall အနုပညာ Display, အရောင်အသွေးစုံသောပရိယာယ်အားဖြင့်ရုံးပျိုးခင်းတိုခန်းငယ်ဂိုဒေါင်ဥယျာဉ်အံဆွဲမီနူး Thread ရေတပ် Paint ဇယားလက်ဆောင်ထုပ်ပိုးပြီး caddy Seating မီးဖိုချောင်ထဲမှာ display ကိုထိန်သိမ်း, Backsplash Spinning, Tools များစည်းရုံးရေးမှူး, လက်ဝါးကပ်တိုင်ချုပ်အင်္ကျီကြိုးကွင်းရှုမြင်သုံးသပ်ကြ, Pot Instagram ကိုထိန်သိမ်း။ များတွင်အသုံးပြုကိစ္စတွင် Display ကိုလက်ဝတ်ရတနာ #KitchenPegBoard မီးဖိုချောင်ထဲမှာစိတ်ကူး # Peggy ဘုတ်အဖွဲ့ဘုတ်အဖွဲ့။ ရာထူးကျင်းပရန်မြို့ရိုးပေါ်မှာတစ်မီးဖိုချောင် pegboard ။ ထိုအခါချိတ်-shaped JULV မီးဖိုချောင်ထိုကဲ့သို့သောအိုးများ, အိုး, ခွက်သို့မဟုတ်ရေတစ်ဖန်အဖြစ်တန်ဆာနှင့်တစ်ဦးခြင်းတောင်းဆွဲထားဝါယာကြိုးဆွဲထားဖို့ငံပြာရည်ပုလင်းသွပ်ဖို့ installed ။ Layout အပြင်အဆင်ကနည်းနည်းချိတ်ဆွဲထားတယ်။ များလွန်းတဲ့သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းမီးဖိုချောင်ပစ္စည်းကိရိယာများ, ပေါင်းအလိုလိုသိလက်တဆုပ်စာနှင့်အတူထွက်ဆွဲထား။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်သူများကအိမ်အကြံပြုပါသည်။ က Wall SPC ဘုတ်အဖွဲ့မြို့ရိုးအကာစရာကုလားကာသိုလှောင်မှု။ အများဆုံးပုံမှန်မဟုတ်သောအလှဆင်၏ဂျ, မြို့ရိုးကိုအလှဆင်စျေးကြီးခိုင်ခံ့သောကြော့ကြည့်ရှုပါ။ Decoration ပြန်လည်သင့်မြတ်မရ က Wall ရဲ့တနင်္ဂနွေသင့်ကိုယ်ပိုင်, အချို့ကိုသင်အေးမြ chic နှင့်ခေတ်မှီစိတ်ကူးများလုပျနိုငျ, ထူးခြားတဲ့ပုံစံမျိုးစုံ, လုပ်ဆောင်ချက်ကို, အရည်အသွေး, ရေရှည်တည်တံ့ရေးနှင့်ကုန်ကျစရိတ်တတ်နိုင်အပေါ်ချွတ်စတင်ခဲ့သည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကနေဖန်ဆင်းတော်အဝတ်အစားများ၏တီထွင်မှုများ၏အနီးကပ်အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ လမ်းကြောင်းသစ်ချစ်စရာကောင်းအိမျတျောကို built-in built-in လမ်းကြောင်းသစ်နှင့်အတူပရိဘောဂ diy အခန်းထဲမှာကိုယ်နှိုက်အတွင်း IDEA အတုနံရံများလာအောင်နှိုးဆွပြည့်စေတော်မူ၏။ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ တင့်တယ်ရုပ်ပုံဘောင်ကာစရာကုလားကာ Feng Shui ကိုကူညီပါ အစားထိုး Walter ပယ်ရီပယ်ရီနောက်ခံပုံများ, မြို့ရိုးကိုစတစ်ကာများ, မြို့ရိုးကိုပုံစံမျိုး 3D နံရံမျက်နှာကျက်, ကြမ်းပြင်, ရေကိုခံနိုင်ရည်ဆန့်ကျင်ဘက် installation ကိုသူ့ဟာသူ။
Panel ကိုစက်ရုံတွေ, ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံအဆောက်အဦ, ပြခန်းများနှင့်ဖီးအတွက်ကုတင်, ဧည့်ခန်း, အိပ်ခန်း, ရုံးအဆောက်အဦများအတွက်စီးပွားရေးအင်းနထေိုငျ, လူနေအိမ်တိုက်ခန်းအိမ်သူအိမ်သားပြားရုံးဟိုတယ်, spa အပန်းဖြေစခန်း, Landscaping ပေါက်ကွဲမှုများများအတွက်တိုက်ခန်းများအကြီးအကဲလည်းဖြစ်သည်။ ဧရိယာ ကို Creative ချောမွေ့စွာ ပတ်ပတ်လည် – ကိရိယာငယ်စတုရန်းမှလက်နက်ခြေရာခံ။ ဝါယာကြိုးများကုန်စည်, မျက်မှန်, အိတ်, ခါးပတ်, ဖိနပ်, ပြပွဲအဝတ်တောင်းအပေါ်ဦးထုပ်ချိတ်ဆွဲထားတယ်။ ပလပ်စတစ်သိုလှောင်မှုသေတ္တာများ အဆိုပါ panel ကိုဖွင့်ဝါယာကြိုးပုတီး – လည်ဆွဲ။ CD ကိုထိန်သိမ်း, ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကွင်းခတ်, ပလပ်စတစ်စျေးနှုန်း tags များ။ Mini ကို Mart စူပါမားကတ်စင်ပေါ်။ strips တွေမြှင့်တင်ရေးစတိုင်ထပ်ခိုး Vintage ဖက်ရှင်စတိုးထပ်ခိုးမော်ဒန်ခေတ်ပြိုင်, အပူပိုင်းဒေသ, Neo-Classic, Retro, အာရှဖက်ရှင်စတိုး Resort ကို, Pantip, KhaiDee, ပင်မစာမျက်နှာ Decoration, BaanlaeSuan, IKEA, အိမ်စာ, HOmepro, ထိုင်း Watsadu Times က။ ပစ္စည်းများ, ပြည်ထဲရေးဗိသုကာဒီဇိုင်း
#ClipBoardStationeryPegBoard တစ်ဦးကို clipboard နှင့်အတူ # Peggy ဘုတ်အဖွဲ့သည်မြို့ရိုးဘုတ်အဖွဲ့။ # Peggy ဘုတ်အဖွဲ့ကိရိယာအစုံ
က Wall အပြင်အဆင်အကြံပြုချက်များ clipboard ထံနှင့်အတူ တစ်ရောင်စုံ Display ကိုအဘို့အ clipboard ။ ကြောက်ရွံ့သောစိတ်နံရံပျက်စီးဖြစ်ကြောင်းအဘယ်မှာရှိ။ Peggy တိ clipboard မှလာမယ့်ရှေ့တော်၌ထိုဘုတ်အဖွဲ့သို့မဟုတ်မြို့ရိုးအမှပူးတွဲပါတစ်ဘုတ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ clipboard ဟာ clipboard ထံမှ၎င်း၏ချစ်စရာကောင်းတဲ့အရောင်မှမဆိုကလစ်၏အထင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးဓါတ်ပုံတစ်ပုံသို့မဟုတ်အနုပညာတစ်ခုသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားကိုအသုံးပြုပါ။ ထိုအခါအဟောင်းအမှတ်တရများနှင့်အတူညှပ်လာဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ကျနော်တို့ပြီးသားကြောင်းသိသောရိုးရှင်းတဲ့အိုင်ဒီယာ။ နံရံကများသောအားဖြင့်ဖြစ်တယ်ပုံဘောင်နှင့်အတူအလှဆင်နေကြပါတယ်။ သို့သော်တစ်ဦးဆောင်ပုဒ်ရွေးချယ်ရာတွင်အားဖြင့်ကြော့ရှင်း add လိမ့်မည်။ တစ်ဦးထက်ပိုသောဂရပ်ဖစ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားအတွက်ဘောင်များအဘို့အရွေးချယ်။ အသေးစားနှင့်အကြီးစားနှစ်ဦးစလုံး ပိုပြီးရိုးကိုဖို့ပြီးထိကထပ်ပြောသည်။
#DIYCraftsBoard #KnittingSewingPegBoard ပန်းလက်မှုပညာနှင့်အတူ # SPC ဘုတ်အဖွဲ့ဘုတ်အဖွဲ့မြို့ရိုးကိုအလှဆင်
ပစ္စည်းကိရိယာများအများကြီးရှိကြောင်း DIY အလုပ်။ သငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန်မလိုပါ ဒါကစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ် သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာစုစည်းရန်။ ဒါဟာသိပ်ထရံကိုမှီတိုငျအောငျမဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်လည်းသပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ်ကြည့်ဖို့အလုပ်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ကူညီမှုအတွက်အသုံးဝင်။
ဖောက်ထားသစ်သားကိုပိုပြီးလုပ်အားထုတ်လုပ်ရန်နှင့်မိုးသည်းထန်စွာဝန်အောက်မှာအတိုင်နှင့်ခွဲထွက်အဖွဲ့ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ရံဗေဒအကြောင်းပြချက်များအတွက်ရှေးခယျြထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောထင်းရှူးအဖြစ်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့သစ်သားကိုမကြာခဏအသုံးပြုကြသည်, ထိုသို့ဓာတုဗေဒအစှမျးသတ်တိနှငျ့မီးနှောင့်နှေးဝိသေသလက္ခဏာများကုသသို့မဟုတ်ပထမဦးဆုံးအထပ်သားသို့လှည့်နိုင်ပါသည်။ ဖောက်ထားသစ်သားအစားဖောက်ထား hardboard ၏ပိုပြီးစတုရန်းပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုပါးလွှာချွတ်အဖြစ်တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါသည်။ သတ္တု pegboard စနစ်များကိုများသောအားဖြင့်သံမဏိထွက်လုပ်နေကြတယ်။ ကပိုကြီးစာရွက်များထဲမှာရောင်းဖို့နှိုင်းယှဉ်, အဘိုးထိုက်သောနှေးကွေးနေသေးတယ်နှင့်မတတ်နိုင်သောလိမ့်မယ်အဖြစ်သတ္တု pegboards များသောအားဖြင့်, strips တွေအတွက်တပ်ဆင်ထားကြသည်။ လုံလုံလောက်လောက်ထူသတ္တု pegboards အထိုင်အချက်များအကြား SAG လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သတ္တု pegboard မမတိုင်မီမယ့်အစား, ထိုကဲ့သို့သောသစ်သားထုပ်သို့မဟုတ် sheetrock အဖြစ်မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် system ရဲ့အထိုင်များသောအားဖြင့်တစ်ဦးမိုးသည်းထန်စွာအလေးချိန်အောက်တွင်ကျရှုံးပါလိမ့်မယ်။ ထုတ်လုပ်သူ tools များနှင့် mounting မှတ်များ၏ခန့်မှန်းတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအပေါ် အခြေခံ. အခြားအဂီယာဆွဲထားဖို့ဖောက်သည်အကြံပြုသည်။ အခြားစနစ်များ ချ. အပြီးတူးတွင်းရှိစဉ်အခါအရည်အသွေးမြင့်သတ္တု pegboard စနစ်များ, extruded ပေါက်တွေကိုအသုံးပြုပါ။
ရေးဆွဲခြင်းစင်ပေါ်သိုလှောင် Tools များ #PegboardHook
သိုလှောင်မှု tools တွေဆွဲထား drawing board ကို # Peggy ဘုတ်အဖွဲ့။
Pegboard ပြား, ဖောက်ထားသံမဏိမြို့ရိုးအကာစရာကုလားကာကိရိယာများ။ အညီအမျှလှပတဲ့တွင်းဖွဲ့စည်းခေါက်ဖို့သံမဏိစာရွက်များ၏ဒီဇိုင်း။ တစ်ခုချင်းစီကိုအပေါက်ဆွဲထားချိတ်ရိုက်ဖို့အသုံးပြုပါလိမ့်မည်, အ pegboard အတွက် tools တွေကိုအိတ်ပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်ကုန်ဆွဲထားဘို့ချိတ်ဒီထုတ်ကုန်၏အမည်ကိုမကြာခဏယေဘုယျအသုံးအနှုန်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ စာရွက်များကနေထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ် သစ်သား, သတ္တုသို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများဆင်ယင်ခြယ်စည်းရုံးရေးအတွက်အလွန်လူကြိုက်များကြသည်။
မြို့ရိုးကိုသိုလှောင်မှု tools တွေကိုဆွဲထားသိုလှောင် Tools များ DIY Kit Winnipeg ပျဉ်ဘုတ်အဖွဲ့ယူပြီးဖောက်ထား Pegboard Hook စင်ပေါ်, tool ကိုသိုလှောင်မှုစင်ပေါ် # Pegboard Hook Hook သံချိတ်ဝါယာကြိုးခြေထောက်က၎င်း၏စာရင်း, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ # Pegboard အပေါ်ဆွဲထား။ ဘုတ်အဖွဲ့စာရွက်များ, လူမီနီယမ်, သံမဏိ, သစ်သား။ တွင်းဖွဲ့စည်းစက်မှုဇုန်, # သစ်သားပျဉ်ပြားသံမဏိစာရွက်မြို့ရိုးကိုအလှဆင်စက်ရုံ-စတိုင်မီးဖိုချောင်ထဲမှာအပေါက်။ ကရိယာအမှတ်တရ Tools များ Holder သိုလှောင်ဆင်ခက်ဘုတ်အဖွဲ့ဖောက်ထား hardboard ဆွဲထားအညီအမျှလှပတဲ့တွင်းနှင့်အတူ Pre-တူးဖြစ်သော hardboard စနစ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါတွင်းထိုကဲ့သို့သောအလုပ်ရုံများတွင် tools များအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့ဖို့တံစို့သို့မဟုတ်ချိတ်လကျခံဖို့အသုံးပြုကြသည်။ Pegboard ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏ hardboard, သစ်သား, သတ္တု, သို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများ၏လုပ်ဖောက်ထားသိုလှောင်မှုပျဉ်ပြားများအတွက်ယေဘုယျအသုံးအနှုန်းအဖြစ်အသုံးပြုကြောင်းဒီထုတ်ကုန်တစ်ခုအမှတ်တံဆိပ်အမည်ဖြစ်တယ်။
Peggy မြို့ရိုးကိုသိုလှောင်မှု tools တွေကိုဆွဲထားပေါက်ပျဉ်ဘုတ်အဖွဲ့, အရွယ်အစားက 50 x ကို 50 စင်တီမီတာ။
တပ်ဆင်ခြင်း # တပ်ဆင်ခပျဉ် SPC ဘုတ်အဖွဲ့ #PegboardsHook ။
ဖောက်ထား hardboard နှင့်အလားတူစနစ်များကိုဖြစ်နိုင်သမျှအသုံးပြုမှုများ၏အကွာအဝေးကိုထိခိုက်ကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောလက္ခဏာများရှိပြီးတစ်ဦးချင်းစီ၏, ပစ္စည်းများအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနေကြသည်။ စံဖောက်ထား hardboard များသောအားဖြင့်ဗဓေလသစ်၏ထို့အပြင်အတူသစ်သားအမျှင်များ လုပ်. , ရေနံ polymerize မှမြင့်မားသောအပူချိန်မှာ linseed ရေနံနှင့်မုန့်ဖုတ်၏ပါးလွှာသောအလွှာနှင့်အတူ coating အားဖြင့်စနစ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကပိုရေနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခုခံ, ခိုငျမာကျောမှုနှင့်ဆန့အစွမ်းသတ္တိကိုပေးစွမ်းသည်။ Hardboard တင်နိုင်နှင့်အသက်အရွယ်နှင့်အစိုဓာတ်၏ရှေ့တော်၌အတိုင်နှင့်အတော်ကြာ mounting မှတ်ကြားတွင်ပင်အလေးချိန်ဖြန့်ဖြူးဖို့လုံခြုံမဟုတ်လျှင်မိုးသည်းထန်စွာအလေးချိန် (အတိအကျအလေးချိန်ဟာရှုထောင့်နှင့် hardboard ၏အရည်အသွေးအပေါ်အခြေခံသည်) အရ SAG မည်။
သိုလှောင်မှု tools တွေဆွဲထား Peggy ဘုတ်အဖွဲ့ပျဉ်အုတ်ရိုးသည်။ စံတွင်းတစ်အကွာအဝေးရှိသည်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ installation လွယ်ကူသည် သင်လေးနှစ်ဖက်ကပ်ချင်ရာအရပ်, မြို့ရိုးကိုအပေါက်။ ထိုအခါကျောက်ဆူးများနှင့် screw နှစ်ခုချက်ချင်းလိုအပ် fix ရန်။ အဲဒီအကြောင်းတစ်ခုလက်မနှင့်အလယ်တန်း plug ကို Hook bracket ကပြီးသားတပ်ဆင်ထားပြီးတစ်ဦးအထူဖို့ခေါက်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ကျောတက်အနားသတ်တွန်းမထားပါနဲ့။
တစ်ဦး pegboard system ကို Installing အဖွဲ့အစည်းကိုအားပေးမယ့်အမြန်လမ်းနှင့်ရရှိနိုင်အလုပ်အာကာသတိုးပွားစေပါသည်။ ဒေါင်လိုက်အာကာသအသုံးချဖို့အသုံးပြုပုံ tools တွေကိုမြင်နိုင်နဲ့အလွယ်တကူစီထားသောဖြစ်ကြသည်။ pegboard တစ်ဦး 1 “x ကို 1” ဇယားကွက်ပေါ်မှာ Pre-လက်သီးဖြင့်ထိုးဖောက်သောကွောငျ့, tool ကိုကြိုးကွင်းသို့ပြောင်းရွှေ့နှင့်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ reconfigured နိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ကားဂိုဒေါင်အစောပိုင်း 1990 ခုနှစ်မတိုင်မီတည်ဆောက်ခဲ့လြှငျ, အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်ရှင်းလင်းသောမြို့ရိုးကိုလုံးရှိသည်လိမ့်မယ်ဖြစ်ကြသည်။ နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင်မီးသတ်ကုဒ်ခြောက်သွေ့သောမြို့ရိုးကိုထည့်သွင်းပြဌာန်း။ pegboard ဆက်စပ်ပစ္စည်းအဆိုပါ mounting တံစို့ထားရှိရန်ဘုတ်အဖွဲ့နောက်ကွယ်မှသေးငယ်တဲ့ပျက်ပြယ်လိုအပ်သောကြောင့်, furring strips တွေ drywall ကျော်သွင်းယူမှုများအဘို့အလိုရှိပါသည်။
လည်းဖောက်ထား hardboard သို့မဟုတ် perfboard ကိုခေါ် Pegboard, ဆွဲထား tools များနှင့်အခြားပေါ့ပါးတ္ထုများအတွက်အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့အနည်းဆုံးစျေးကြီးသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ရိုးတပ်ဆင်ထားနှင့်သတ္တုချိတ်နှင့်အတူ outfitted အခါ, pegboard တစ်ဦးအံဆွဲ၏နောက်ကျောတစ်ခုသို့မဟုတ် tool ကိုရင်ဘတ်၏အောက်ဆုံးအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ထံမှပစ္စည်းများကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အဆင်ပြေလမ်းပေးပါသည်။ Pegboard သင်တို့ကိုလည်းသတ္တုနေရာနိုငျသောကွောငျ့, သင့်သောမြို့ရိုး-Hung ပစ္စည်းများကို၏အစီအစဉ်သို့မဟုတ်စုဆောင်းခြင်းကိုပြောင်းလဲရန်လွယ်ကူစေသည်တိုင်းတာခြင်းမပါဘဲသင်ကြိုက်နှစ်သက်မဆိုလမ်း hooks, တွင်းတူး, ဒါမှမဟုတ်မြို့ရိုးအစလက်သည်း hammering ။ တကယ်တော့, pegboard သင်ဆွဲထားချင်နီးပါးဘာမှထားရှိရန်ဝယ်နိုင်ကွဲပြားခြားနားသောချိတ်များနှင့်ကွင်းများ၏လူအစုအဝေးရှိပါသည်နိုင်အောင်ရှည်လျားများအတွက်တန်ဖိုးနည်းသိုလှောင်မှု option ကိုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ မဆိုအိမ်ပြန်စင်တာအဆိုပါ pegboard နှင့်ချိတ်နှစ်ဦးစလုံးသယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကနေအများဆုံးတန်ဖိုးကိုရရှိရန်မှန်ကန်စွာ pegboard တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ သင့်ရဲ့ကားဂိုဒေါင်ရိုးကိုလုံးထိတွေ့ကြလျှင်, သင်ရိုးရှင်းစွာလုံးမှ pegboard ဝက်အူနိုင်ပါတယ်။ ယင်းလုံးအကြားအဆိုပါအချည်းနှီးသော bays တံစို့ထည့်များအတွက်လိုအပ်သောရှင်းလင်းရေးပေးပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချောမြို့ရိုးပေါ်မှာသို့သော်သင်လိုအပ်သောရှင်းလင်းရေးဖန်တီးနှငျ့အခြို့ ADDED တောင့်တင်းပေးရန်အ pegboard နောက်ကွယ်မှ furring strips တွေတစ်မူဘောင်ကို install လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာစီမံကိန်းကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်, ချောအသွင်အပြင်ပေးရန်သင့် pegboard ပတ်လည် frame ကိုတညျဆောကျဖို့လည်းကောင်းတစ်စိတ်ကူးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကားဂိုဒေါင် damp ဖြစ်လေ့ရှိလျှင်, အရောင်တင်ဆီသို့မဟုတ် primer နှင့်အပြင်ပန်းဆေးသုတ်အတော်ကြာအင်္ကျီနှင့်အတူ pegboard နှစ်ခုစလုံးမျက်နှာများတံဆိပ်ခတ်ထား; မဟုတ်ရင်သူကအစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူတက်တကိုယ်လုံးရောင်သို့မဟုတ်ပင် delaminate ပါလိမ့်မယ်။ ယင်းလုံးအကြားအဆိုပါအချည်းနှီးသော bays တံစို့ထည့်များအတွက်လိုအပ်သောရှင်းလင်းရေးပေးပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချောမြို့ရိုးပေါ်မှာသို့သော်သင်လိုအပ်သောရှင်းလင်းရေးဖန်တီးနှငျ့အခြို့ ADDED တောင့်တင်းပေးရန်အ pegboard နောက်ကွယ်မှ furring strips တွေတစ်မူဘောင်ကို install လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာစီမံကိန်းကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်, ချောအသွင်အပြင်ပေးရန်သင့် pegboard ပတ်လည် frame ကိုတညျဆောကျဖို့လည်းကောင်းတစ်စိတ်ကူးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကားဂိုဒေါင် damp ဖြစ်လေ့ရှိလျှင်, အရောင်တင်ဆီသို့မဟုတ် primer နှင့်အပြင်ပန်းဆေးသုတ်အတော်ကြာအင်္ကျီနှင့်အတူ pegboard နှစ်ခုစလုံးမျက်နှာများတံဆိပ်ခတ်ထား; မဟုတ်ရင်သူကအစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူတက်တကိုယ်လုံးရောင်သို့မဟုတ်ပင် delaminate ပါလိမ့်မယ်။ ယင်းလုံးအကြားအဆိုပါအချည်းနှီးသော bays တံစို့ထည့်များအတွက်လိုအပ်သောရှင်းလင်းရေးပေးပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချောမြို့ရိုးပေါ်မှာသို့သော်သင်လိုအပ်သောရှင်းလင်းရေးဖန်တီးနှငျ့အခြို့ ADDED တောင့်တင်းပေးရန်အ pegboard နောက်ကွယ်မှ furring strips တွေတစ်မူဘောင်ကို install လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာစီမံကိန်းကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်, ချောအသွင်အပြင်ပေးရန်သင့် pegboard ပတ်လည် frame ကိုတညျဆောကျဖို့လည်းကောင်းတစ်စိတ်ကူးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကားဂိုဒေါင် damp ဖြစ်လေ့ရှိလျှင်, အရောင်တင်ဆီသို့မဟုတ် primer နှင့်အပြင်ပန်းဆေးသုတ်အတော်ကြာအင်္ကျီနှင့်အတူ pegboard နှစ်ခုစလုံးမျက်နှာများတံဆိပ်ခတ်ထား; မဟုတ်ရင်သူကအစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူတက်တကိုယ်လုံးရောင်သို့မဟုတ်ပင် delaminate ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာစီမံကိန်းကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်, ချောအသွင်အပြင်ပေးရန်သင့် pegboard ပတ်လည် frame ကိုတညျဆောကျဖို့လည်းကောင်းတစ်စိတ်ကူးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကားဂိုဒေါင် damp ဖြစ်လေ့ရှိလျှင်, အရောင်တင်ဆီသို့မဟုတ် primer နှင့်အပြင်ပန်းဆေးသုတ်အတော်ကြာအင်္ကျီနှင့်အတူ pegboard နှစ်ခုစလုံးမျက်နှာများတံဆိပ်ခတ်ထား; မဟုတ်ရင်သူကအစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူတက်တကိုယ်လုံးရောင်သို့မဟုတ်ပင် delaminate ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာစီမံကိန်းကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်, ချောအသွင်အပြင်ပေးရန်သင့် pegboard ပတ်လည် frame ကိုတညျဆောကျဖို့လည်းကောင်းတစ်စိတ်ကူးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကားဂိုဒေါင် damp ဖြစ်လေ့ရှိလျှင်, အရောင်တင်ဆီသို့မဟုတ် primer နှင့်အပြင်ပန်းဆေးသုတ်အတော်ကြာအင်္ကျီနှင့်အတူ pegboard နှစ်ခုစလုံးမျက်နှာများတံဆိပ်ခတ်ထား; မဟုတ်ရင်သူကအစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူတက်တကိုယ်လုံးရောင်သို့မဟုတ်ပင် delaminate ပါလိမ့်မယ်။
ဖောက်ထား hardboard နှင့်အလားတူစနစ်များကိုတံစို့ချိတ်ကိုထောကျပံ့ဖို့ဒီဇိုင်းနေကြသည်။ အချို့သောစနစ်များအစား screw နှစ်ခုကိုသုံးပါသော်လည်းဤရွေ့ကား, များသောအားဖြင့်လက်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့်တစ်ဦးတည်းဆွဲငင်အားနှင့်ကိုယ်ကိုထောကျပံ့ပေးနေကြသည်။ ဤရွေ့ကား screw နှစ်ခုသိသိသာသာဝန်အောက်မှာကွေးကနေသတ္တုကာကွယ်တားဆီးဖို့အပိုဆောင်းကြိုးကထောက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကိရိယာများနှင့်သော့အဖြစ်အရာဝတ္ထုအမျိုးမျိုးများအတွက်သိုလှောင်မှုအဖြစ်အလှည့်လုပ်ရပ်အတွက်ချိတ်။ မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်သတ္တုစနစ်များထိုကဲ့သို့သောတွန်းအားပေး lawnmowers နှင့်ဒေါင်လိုက်သိမ်းဆည်းထားစက်ဘီးအဖြစ်အပြင်းထန်ဆုံးတ္ထု, ထောကျပံ့ပေးနိုငျသညျ။ ဤရွေ့ကားသိုလှောင်မှုစနစ်များကိုများသောအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောကားဂိုဒေါင်, သိုလှောင်မှုသွန်းသို့မဟုတ်အလုပ်ရုံအဖြစ်အိမ်ထောင်စုများ၏ utility ကိုဧရိယာများတွင်တပ်ဆင်ထားကြသည်။ သူတို့ကအစ (ပိုကြီးပြီးပိုထူဗားရှင်းကြီးတွေ-box ကိုစတိုးဆိုင်များအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်) လျှော့စျေးစတိုးဆိုင်များအဘို့စင်လုပ်ရန်နောက်ကျောနှင့်အတူ, ထိုကဲ့သို့သောစက်ရုံတွေအဖြစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် enviroments မှာအသုံးပွုနိုငျ, ဒါပေမယ့်မရှိသလောက်တစ်ဦးအလုပ်ခွင်ပိုအဖြူကော်လာဒေသများရှိမြင်ကြသည်။
မြို့ရိုးကိုသိုလှောင်မှု tools တွေကိုဆွဲထားသိုလှောင် Tools များ DIY Kit Winnipeg ပျဉ်ဘုတ်အဖွဲ့ယူပြီးဖောက်ထား Pegboard Hook စင်ပေါ်, tool ကိုသိုလှောင်မှုစင်ပေါ် # Pegboard Hook Hook သံချိတ်ဝါယာကြိုးခြေထောက်က၎င်း၏စာရင်း, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ # Pegboard အပေါ်ဆွဲထား။ ဘုတ်အဖွဲ့စာရွက်များ, လူမီနီယမ်, သံမဏိ, သစ်သား။ တွင်းဖွဲ့စည်းစက်မှုဇုန်, # သစ်သားပျဉ်ပြားသံမဏိစာရွက်မြို့ရိုးကိုအလှဆင်စက်ရုံ-စတိုင်မီးဖိုချောင်ထဲမှာအပေါက်။ နံရံ Tools များ Holder သိုလှောင်ဆင်ခက်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ဆွဲထားဘို့စားသုံးသူကုန်ပစ္စည်းများ။
ထရံကို Pegboard အပေါ်စာရွက် Pegboard Hook ဝယ်ယူစျေးနှုန်းဘယ်မှာ ,, Hook, ချိတ်, ချိတ်ဝါယာကြိုးခြေထောက်, စင်ပေါ်တပ်ဆင်ထားသည်၎င်း၏အရာဝတ္ထုပေါ်တွင်သိုလှောင် Tools များ DIY Kit ယူပြီးသံမဏိပန်းကန် Pegboard စင်ပေါ်ဆွဲထား, Pegboard ဘုတ်အဖွဲ့သံမဏိဖောက်ထားသောမြို့ရိုး၏ Winnipeg ဘုတ်အဖွဲ့။ ချိတ်ပြားတစ်စည်၌အပေါက်ကိုဖွဲ့စည်းတစ်ခုချိတ်ဝါယာကြိုးသိုလှောင်မှုကိရိယာများ, မြို့ရိုးအဟန်ပြအပေါ်ချိတ်ချိတ်မယ့်ကာစရာကုလားကာကိုသံချိတ်, အထပ်သား၏ pegboard ပျဉ်, သံမဏိစာရွက်ပေါ်တွင်ချိတ်ဆွဲ, pegboard devices တွေကိုဂိမ်းရိုက်ထည့်ပါ။ tools တွေဆွဲထား Store မှာ, Pegboard စတိုင်စက်မှုဇုန် Peggy ဘုတ်အဖွဲ့ပန်းကန်မြို့ရိုးကို plug ကို, PegBoard စီးရီးပျဉ်ပြား Panel ကိုကိရိယာများ, ဥယျာဉ်ကိုဆွဲထား, ခြေထောက်ကြိုးဆွဲချ Pegboard Hook အဆိုပါချိတ်ချိတ်မှာ chrome အမွှာအက်စ်, Pegboard ဆက်စပ်ပစ္စည်း Display ကိုချထားတဲ့။ ချိတ်ကာစရာကုလားကာဝက်အူလှည့, သံနှုတ်, တူ, စွယ်စုံစတိုးဆိုင်၏ပန်းကန် pegboard ချိတ်ချိတ်ချိတ်ကာစရာကုလားကာစင်ပေါ်, pegboards ပြား, အိမ်အလှဆင်စုစည်းပြီး, အိပ်ခန်း, မီးဖိုချောင်, pegboard ဒီဇိုင်း Display ကို, Holder ထိန်သိမ်းသိုလှောင်ရပ်, အမှတ်တရစင်ပေါ် tools တွေကိုဘုတ်အဖွဲ့အစီအစဉ် ,.
Pegboard တစ်တံစို့ဘုတ်အဖွဲ့စာရွက်သံမဏိ, သစ်သားသို့မဟုတ် papier သေးငယ်တဲ့အပေါက်အမှုအရာဆွဲထားအတွက်အသုံးပြုရရန် disc ကိုဖြတ်ပြီးတူးခဲ့ကြသည်။ သိုလှောင်ရေးပစ္စည်း တစ်ဦးရှုပ်ထွေးစေပါ ထိုအခါခန်းထဲမှာအာကာသကယ်တင် ဘယ်လေ့ပစ္စည်းများကိုသိုလှောင်ရန်အသုံးပြုသည်။ မီးဖိုချောင်အတွက်ကရိယာ လက် tools များ အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောစာရေးကိရိယာ အဖြစ်ကောင်းစွာ ဒါဟာနောက်တဖန်နှစ်ဆယ်ကိုမခံခဲ့ရ ကုန်ကြမ်းက Leave တချို့လှလှပပခြယ်သခြင်းနှင့်အဆင်တန်ဆာတွေနဲ့အလှဆင် refurbished နေစဉ်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များင်း၏ထူးခြားတဲ့စတိုင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့, ကအအေး။ အမျိုးမျိုးသောရောင်စုံ Pegboard ပြားများအသုံးပြုမှုကြောင့်လည်းသူတို့ကိုချစ်စရာကြည့်ရှုစေသည်။ သူလည်းလှပ၏အိမျဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရရန်။ ယခုငါတို့အိမျတျောကိုအလှဆင်ဖို့စိတ်ကူးကိုရောက်စေဖို့ရှိသည်, အဆင်းလှသော Pegboard လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ကောင်းစွာတွေ့မြင်ထံသို့လာကြ၏။Shannon လေဆိပ်၏ CHANCON ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်း / ထုတ်ကုန်။ channel Properties ကိုထုတ်လုပ်သူက Wall ထိန်းချုပ်ရေးသတ္တု pegboard ပြားအထူးပြုကြောင့် pegboard tool ကိုသိုလှောင်မှုနဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုမှကြွလာသောအခါ slot tool ကိုဘုတ်ပြားလူတန်းစားအတွက်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ကြသည်။ အမှတ်တရထိန်းချုပ်ရေး pegboard ကြာရှည်ခံမှု, အစွမ်းသတ္တိကိုဘက်စုံအတွက်သာလွန်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုကနေကိုယ်နှိုက်ခွဲခြား။ , တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်၏လွယ်ကူခြင်း။ အမှတ်တရထိန်းချုပ်ရေး pegboard ပြားသာလွန် pegboard tool ကိုသိုလှောင်မှုပူဇော်ကြဘူးမသာပေမယ့်ဒီ pegboards တို့သည်ကြီးစွာသောတန်ဖိုးကိုမှာဒီသည်။ ထိုအချိန်ကာလအားဖြင့်သင်စတိုးဆိုင်မှ သွား. မူဘောင်, ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအပေါငျးတို့သဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဤအအဆငျပွမှေုမြား၏ထိပ်တွင်။ သင်လိုအပ်သမျှကိုလက်ျာဘက်သေတ္တာထဲတွင်ကြောင့်သင်ဖြစ်နိုင်သင့်ရဲ့အမှတ်တရထိန်းချုပ်ရေး pegboard installation နဲ့ဖွယ်ရှိပင်သုံးစွဲလျော့နည်းငွေနှင့်ပြီးဆုံးပါပြီမယ်လို့ရုပ်ဆိုးဟောင်းနွမ်း masonite သို့မဟုတ်ပလပ်စတစ် pegboard စာရွက်များဆွဲထားဖို့လိုအပျ ,.အမှတ်တရထိန်းချုပ်ရေးသတ္တု pegboard နှင့်အတူသင်ကအစားထိုးလိုအပ်ပါတယ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တစ်ဦးတစ်သက်တာနောက်ဆုံးမှဒီဇိုင်းနှင့်အာမခံသော pegboard ရပါလိမ့်မယ်။
ဤရွေ့ကားဆွဲဆောင်မှုများနှင့်ခြစ်ရာခံနိုင်ရည်, pegboard ပြားကားဂိုဒေါင်, ဆိုင်, မီးဖိုချောင်, ရုံး, ဗီရို, ဒါမှမဟုတ်ယာဉ်ခန်းထဲမှာအကြီးအအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အဆိုပါအမှတ်တရထိန်းချုပ်ရေးမှကျေးဇူးတင်ပါသည် modular ဒီဇိုင်း pegboard အချိန်နှင့်ဘတ်ဂျက်ခွင့်ပြုအဖြစ်, သင်သည်သင်၏သိုလှောင်မှုဧရိယာကိုချဲ့ထွင်နိုင်ပါ။ သင်ရုံဧရိယာဖြည့်စွက်ရန်အချိန်အနည်းငယ်အပိုပြားလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဒါတွေက pegboard ပြားတစ်ဦးချင်းစီအကြီးသို့မဟုတ် Pre-ထုပ်ပိုးတန်ဖိုးကိုပစ္စည်းများနှင့် တွဲဖက်. အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ကြိုးကွင်းဟာ့ဒ်ဝဲသံတူနှင့်ပင်စင်စံချိန်စံညွှန်းများအဘို့ကို double-prong ကြိုးကွင်းမှတစ်ခုတည်း tool ကိုဆွဲထားများအတွက်အခြေခံဦး, L ကိုထံမှများစွာသောပုံစံမျိုးစုံနှင့်အရွယ်အစားအတွက်လာပါတယ်။ သင်အများဆုံးအသုံးပြုဖွယ်ရှိနေအမျိုးအစားပေါ်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စတော့ရှယ်ယာတက်အတွက်မျိုးစုံကြိုးကွင်းကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။ Pegboard နှင့်အတူတစ်စုံတစ်ရာ Organize: အကြံပြုချက်များနှင့်သိကောင်းစရာများ Pegboard နေရာတိုင်း-ပြား, ချိတ်, doodads, သင်ကအမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဟာ့ဒ်ဝဲ store မှာတိုင်းလက် tool ကို pegboard အပေါ်ဆွဲထားသည်။ သော့ခလောက်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအိတ်, ထိုကုန်ပစ္စည်းတန်ပြန် pegboarded မှာနေကြပါပြီ Tacs ၏ပြွန်တိပ်ဖြူ၏အလိပ်။ ပင် pegboard ချိတ် pegboard ချိတ်ပေါ်ချိတ်ဆွဲထားတယ်။ သို့သော်အံ့သြစရာမရှိပါအဖြစ်လာသင့်ပါတယ်။ လက်လီရောင်းသူများ, ကြံ့ခိုင်ဖွင့်မယ့် Display ကို system ကိုလိုခငျြပြန်စီရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်ချက်နဲ့-သင်အိမ်တွင်သင်၏အလုပ်နေရာများအတွက်လိုအပ်တူညီတဲ့အရည်အသွေးတွေ။ Headboard အဝါရောင်လိမ္မာသည် ဖြစ်. ရုံးအံဆွဲမီနူးစီစဉ်, ရေအဝတ်လျှော်တဲ့အခန်းမြို့ရိုးကိုအနုပညာ, လက်ဝါးကပ်တိုင်ချုပ်အင်္ကျီကြိုးကွင်း Office ကိုဗီရိုကိုဖွင့် ,.Pegboard Bins, အစင်သတ္တု pegboard အဆိုပါ Hook ဆက်စပ်ပစ္စည်း, စာပေနှင့်ရှင်အိမ်ရာပစ္စည်းနိုင်လွန်ချိတ်, စင်ပေါ်, Wicker ခြင်းတောင်းဟာစင် bracket ခြင်းတောင်း Panel များ Panel ကို pegboard အဘို့နှင့်အတူတောင်းသည့်တံစို့ရှာဖွေရေးဘုတ်အဖွဲ့စည်းရုံးရေးမှူးစတိုင်ဝါယာကြိုး, အတံစို့ရှာဖွေရေးဘုတ်အဖွဲ့ချိတ်, pegboard Panel ကို Display ရဲ့ pegboard pegboard
ဆိုလိုသည်မှာအဆိုပါကားဂိုဒေါင်မှ pegboard ဟာ Off မွမှေုနျ့နှငျ့ကတစ်ဦးကကုန်အမှတ်တံဆိပ်သစ်သည်အသင့်ဖြစ်ပြီလားသလား Get ရန်ဒါဟာ JobsDB.com ရဲ့အချိန်။ အိမ်တွင်းဘဝ။ Workspace အဖွဲ့အစည်းကနေပျိုးခင်းပုံစံမျိုးရန်, pegboards ပွင့်လင်းစင်ပေါ်၏ဝမ်းကွဲကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏, ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်ပိုအမျိုးစုံရနှင့်ကစား။ သို့သော် pegboards ဖြစ်ခြင်းမှာကိုရပ်တန့်ကြဘူး ကြီးမြတ်စည်းရုံးရေး tools တွေကို; သူတို့လည်းအဲသည်စတိုင်နိုင်ပါတယ်။ အချို့ဆေးသုတ်နှင့်ဒီဇိုင်းအလုပ်နှင့်အတူဤ 17 DIY pegboard စိတ်ကူးများအိမျတျောကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအခန်း၌အလုပ်လုပ်သောကြော့, ရိုးရှင်းသောအဖွဲ့အစည်းစနစ်များသို့စံကားဂိုဒေါင် tool ကို setup ကိုအဆင့်မြှင့်ပါပြီ။
1. အနုပညာသို့ဒါဟာ Turn: သူတို့အားထားပါ တော်တော်လေးကြီးမားတဲ့ပန်းပွင့်သို့မဟုတ်ဂျီဩမေတြီပုံစံတူတစ်ခုခုတစ်ခြယ်လက်ဝါးကပ်တိုင်ချုပ်နံရံနှင့်အတူကောငျးစှာအသုံးပွုဖို့အသုံးမပြုတဲ့အပေါက်။ (ထိုအ Craft, မှတစ်ဆင့်တီထွင်ဖန်တီး)
2. စင်္ကြံ Organize: သင်တံခါး၏အထဲက Get ရန်ကြိုးစားနေသည့်အခါမယ့်အစားကဲ့သို့ပင်တစ်ဦးက Crazy ပုဂ္ဂိုလ်ခန့်အပြေးအလွှား, သင်ဖမ်းပြီး Dash ရန်သည်သေသပ်စွာအရာအားလုံးပြီးတော့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားဆှဲထားပါ။ တစ်ဦးက pegboard သိုလှောင်မှု option ကိုတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောအာကာသဖြစ်ပါတယ် သင်တို့ရှိသမျှသည်တဦးတည်းအဆင်ပြေပွဲချင်းပြီးအတွက်သော့, နေကာမျက်မှန်နှင့်သင့်အိတ်နဲ့တူသူအပေါငျးတို့လိုအပ်ချက်များကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်ရှိရာ။ (ထိုအ Merrythought မှတစ်ဆင့်)
များအတွက်အပြင်အဆင်မှာ 3. Desk: အအခွင့်အရေးတစ်ခုကဒီဇိုင်နာ IKEA စားပွဲပေါ်မှာတစ်ခုတက်မယ့်, အထိန်သိမ်း Menu ကိုအတူ pegboard ပြီးတော့ Spice တချို့ပန်းရောင် Floyd Paint တစ်ပူစီနံဆေးထိုးခြင်းနှင့်အဆိုပါစားပွဲခုံပု cutest စဉ်အကြိုဖွင့်သည်။ ကျနော်တို့အမွှေးအကြိုင်သုံးပြီး၏စိတ်ကူးကိုချစ် တော်တော်လေးမှတ်စုစာအုပ်တွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့ထိန်သိမ်း။ (အသနားခံစာနှင့်အသေးစားမှတဆင့်)
တစ်ဦးဘေးထွက်စားပွဲတင်အမျှ 4. : ဒီတစ်ခါလည်းသငျသညျ ‘အိပ်ခန်းအာကာသပေါ်တိုတောင်းပြန်လည်နှင့်တစ်ဦးအခြမ်းစားပွဲရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ဒါမှမဟုတ်သင်ကဘေးထွက်စားပွဲပေါ်မှာမပေမယ့်သင်ဆဲအပိုသိုလှောင်မှုကိုလိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ဦးက pegboard ပျော်စရာများနှင့်မမျှော်လင့်ဘဲနိုင်ပါတယ် ဒေါင်လိုက်သိုလှောင်မှုအတွက်ရောက်စေဖို့နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အားဖြင့်အနုပညာတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းသို့ကွေ့ရန် အပင်များနှင့်အနည်းငယ်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြဓာတ်ပုံများထည့်သွင်းခြင်း, ချိတ်မှသင်၏တော်တော်လေး bling ဆွဲထား။ (ထိုသည် သာ. ကောင်း၏နေအိမ်, အိမ်နှင့်ဥယျာဉ်ဒီမှတစ်ဆင့်)
5. ကော်ဖီတစ် Nook င်: တစ်ဦးကိုသင်တစ်ဦးက PrettyPhoto ခွက်၏စုစည်းမှု (ထိုအဘယ်သူသည်မဟုတ်လော) Have လျှင်, pegboard တစ်ဦးကပြရန်နှင့်အတူအနည်းငယ် Do Set တစ်ခုအထိ Menu ကိုပု mini ကို cum ကော်ဖီပြီးတော့လက်ဖက်ရည်ဘူတာကျော်အချို့သောပြီးတော့တစ်ဦးက hooks ။ (အဆိုပါအစိမ်းရောင်ဗီရိုမှတဆင့်)
6. Tiny မီးဖိုချောင်သိုလှောင်မှု: တခါတရံမှာသေးငယ်တဲ့မီးဖိုချောင် ဗီရိုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားသို့ bang နှင့်အံဆွဲအပေါင်းတို့သည်လမ်းထွက်ဆွဲမယ့်ရုန်းကန်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ အဲဒီအစားသူအပေါငျးတို့အံဆွဲမှတဆင့်တူး၏, မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းနဲ့မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတွေဖွဲ့စည်းများနှင့်နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်အလွယ်တကူစောင့်ရှောက်ဖို့တစ် pegboard ချိတ်ဆွဲထားတယ်။ (သန့်စင်စက်ရုံကို 29 မှတဆင့်)
ဥယျာဉ်တော်၌ 7. JobsDB.com ဒါဟာထားပါရန်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည် :: တစ်ဦးက Tiny လသာဆောင်ဥယျာဉ် ons တွေကိုဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်သောသူတို့အဘို့, အ pegboard တစ်ဦးကတစ်ဦးကဂရိတ် Way ကို, ဒေါင်လိုက် Add ရန် Be နိုင်သလား, စိုက်ပျိုး။ သင်ကအပေါ်အချို့သော sealer ပန်းချီသေချာအောင်လုပ်ပါ ကရာသီဥတုကားပုပ်ပျက်တတ်, ပြီးတော့တော်တော်မြို့ပြတောတွင်းဖန်တီးရန်အိုးများနှင့်အ pegboard ပန်းချီပျော်စရာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်။ (တိုက်ခန်းကုထုံးမှတဆင့်)
အဆိုပါပျိုးခင်းများတွင် 8. : ရုံကသောကွောငျ့ ‘s တစ်ဦးပြောင်းလဲဇယားသည်အနှီး display ကိုအနည်းငယ်ရှိအောင်နှစ်သက်မဖွစျနိုငျဟုမဆိုလိုပါ။ တစ်ဦး pegboard ပတ်သက်. ပျော်စရာအရာဖြစ်ပါတယ် သင်မှန်ပိုမိုလက်တွေ့ကျတဲ့အပိုင်းပိုင်းနှင့်အတူချစ်စရာနည်းနည်းဓါတ်ပုံများနှင့်ပုံစံမျိုးကိုအပိုင်းပိုင်းဆွဲထားနိုင်ပါတယ်။ (White ကထိုရွှေဆက်သွယ်ပါရန်မှတစ်ဆင့်)
9. အမျှ: တစ် Headboard တစ်ဦးက: အ pegboard အားဖြင့်အဆိုပါ Next ကိုအဆင့်စေရန်အဆိုပါတစ် headboard တစ်ဦးကတစ်ဦး-of-A-ကြင်နာစင်တာ Creating အဘို့ကိုယူပါ။ မျိုးကိုရက်, အခန်းကိုက်ညီဖို့က Paint တွင်းမှတစ်ဆင့်ကြိုးသို့မဟုတ်ဖဲကြိုးတစ်ခုသို့မဟုတ်အကြိုက်ဆုံးဂျီဩမေတြီပုံစံကိုပဲရေးတတ်တယ်။
တစ်ဦးပြခန်းအမှတ်တရအဖြစ် 10. : တစ် Mount သင့်အိပ်ရာကိုနောက်ကွယ်မှဒါမှမဟုတ်အိပ်ရာနောက်ကွယ်မှ pegboards ၏ကြီးမားသော panel ကိုနှင့်တစ်ဦးပြခန်းသောမြို့ရိုးကကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါဟာကတိကဝတ်-phobe အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောင် အမြဲသူတို့ရဲ့ပြခန်းနံရံများ၏အပြင်အဆင်နှင့်အတူကစားသူ။
တစ်ဗီရိုထဲမှာ 11 ဖျောက်ဒါဟာ: ကတည်းက pegboards ပြားချပ်ချပ်များမှာ, သင်ကဗီရိုသို့မဟုတ်စားစရာခန်းထဲမှာအပိုသိုလှောင်မှုအတွက်တံခါး၏နောက်ကျောအပါအဝင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်နီးပါးမည်သည့်နေရာသို့သူတို့ကိုငါ fit နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျဖိုင်များ, ခြင်းတောင်းနဲ့တွဲပြီးအသုံးပြုနိုင်သည့်အခါ နှင့်အခြားသိုလှောင်မှုကိရိယာများ, သငျသညျန့်အသတ်အဖွဲ့အစည်းကရှေးခယျြစရာရှိသည်။ (ထိုသည် သာ. ကောင်း၏နေအိမ်, အိမ်နှင့်ဥယျာဉ်ဒီမှတစ်ဆင့်)
အဖြစ် 12: တစ်ဇွန်းအဆိုပါသိုလှောင်ဆင်: တစ်ဦးကပြန်လာသည့် pegboard ပြီးတော့သစ်သားတံစို့အကောက်ခွန်တစ်ပန်းကန် Tupperware ဖန်တီးသို့မဟုတ်သိုလှောင် Add ရန် moveable ၏အသုံးပြုမှုအားဖြင့်အလျားလိုက်ပါ။ တစ်ခုက In-အံဆွဲ pegboard စည်းရုံးရေးမှူးသင့်ရဲ့အရွက် အံဆွဲပရမ်းပတာ-အခမဲ့နှင့်တစ်ဦးအထက်ကက်ဘိနက်သို့ဟင်းလျာများ၏လေးလံသောလိပ်ခေါင်းရုတ်သိမ်းပေးရန်ရှိခြင်းထံမှသင်တို့ (သို့မဟုတ်အနည်းငယ်သာမီးဖိုချောင်အကူ) စောင့်ရှောက်။ ( သာ. ကောင်း၏နေအိမ်နှင့်ဥယျာဉ်မှတဆင့်) ။
13. ထောက်ပံ့ရေးစင်ပေါ်: ကျနော်တို့ကနည်းနည်းအနေဖြင့် သူတို့အားဿုံတစ်ထပ်တည်းဖြစ်သော tools များ၏သံသယဖြစ်ဖွယ်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့က clipboard ထံပြက္ခဒိန်ဒါမှမဟုတ်ယာဉ်အခန်းထဲမှာသို့မဟုတ် home ရုံးထဲမှာ pegboard အပေါ်ဆွဲထားအစစ်အမှန်ဘဝ pinboards ၏စိတ်ကူးကိုချစ်လုပ်ပါ။
14. တစ်ဦးငွေကောက်ခံပြသရန်: ဒီနေရာမှာတစ်ဦး pegboard ကျောက်စုဆောင်းခြင်းဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည်, ဒါပေမယ့်သင်တွေအများကြီးရှိသည်ဆို trinkets များအတွက်အသုံးပြုရန်နိုင်ဘူး။ ဒါဟာတစ်ရိုးရှင်းပြီးပျော်စရာလမ်းဖွင့် သငျသညျမှာကြည့်ဖို့ကိုချစ်ငယ်သောအရာတို့ကိုပယ်ပြသပါ။Pegboard တံစို့ဘုတ်အဖွဲ့ Display ကို Panel ကို Bins ခြင်းတောင်းစင်၏ သိုလှောင်မှုစည်းရုံးရေးမှူး angle Pegboard ချိတ်နှင့် J Pegboard Hook Pegboard ဟက် display နှင့် Pegboard Cap ပြစူပါ Duty Pegboard Hook Slatbox Pegboard Display ကို Bins Pegboard အဝတ်အစား Pegboard Tool ကို Pegboard acrylic Bins Pegboard ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူများနှင့် Pegboard သင်္ကေတပြရှင် Pegboard ကြမ်းပြင်ကိုဖေါ်ပြရန်ဖြစ်ပေါ်လာသော။ အထူး pegboard <br> ပြသမှုဟာဟာ့ဒ်ဝဲ mounting Display ရဲ့ pegboard – နောက်ဟင်းပွဲများအဆိုပါ pegboard Specials အမိန့်ဟာဟာ့ဒ်ဝဲ pegboard pegboard စင်ပေါ်သင့်မူလစာမျက်နှာစေရန်, အဖွဲ့အစည်း Add နိုင်သလား။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စင်ပေါ်စေသောအခါ, သငျသညျ သငျသညျခငျြသမြှကိုအရွယ်အစားကသူတို့ကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကထုံးစံမထိုက်မတန်သူတို့ကိုသင်ထားခွင့်ပြု သင့်အိမ်သို့မဟုတ်အလုပ်ရုံများတွင်မဆိုတည်နေရာ၌တည်၏။
သူတို့ဘယ်လို pegboard စေသလဲ? တွင်းထိုကဲ့သို့သောအလုပ်ရုံများတွင် tools များအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့ဖို့တံစို့သို့မဟုတ်ချိတ်လကျခံဖို့အသုံးပြုကြသည်။ Pegboard မကြာခဏ hardboard, သစ်သား, သတ္တု, သို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများ၏လုပ်ဖောက်ထားသိုလှောင်မှုပျဉ်ပြားများအတွက်ယေဘုယျအသုံးအနှုန်းအဖြစ်အသုံးပြုကြောင်းဒီထုတ်ကုန်တစ်ခုအမှတ်တံဆိပ်နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်သို့ငါအခုအဓိကအားဖြင့်စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးအာကာသအရှုံးစင်ပေါ်အသေးအဖွဲဖြစ်ကြသည်။ ငါမီးဖိုချောင်ထဲမှာအသုတ်စုံ + ကြိုးစင်ကိုသုံးပေမယ့်ဧည့်ခန်းကိုငါပိုပြီးခေတ်မီဆန်းပြားတစ်ခုခုလိုအပ်ပါတယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါဆိုင်ပြသမှုနဲ့အတူတံစို့စင်ပေါ်ဆက်နွယ်။ ငါကပိုလေးထုတ်ကုန်လိုက်လျောညီထွေဖို့လုံလောက်တဲ့ကြံ့ခိုင်ဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့သည်ထင်ပေမယ့်အလွန်ကြော့ဖြစ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ငါ့အမှားယူဆချက်တိုက်ခန်းကုထုံးအပေါ်တင်ပြ Pegboard စင်ပေါ်စနစ်အားဖြင့် disproved ခဲ့သည်။ ဒီစနစ် intriguingly ရိုးရှင်းသောဖြစ်သော်လည်း, ယဉ်နှင့်လက်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ပင်အခုတော့ဒီကြီးမားတဲ့စာအုပ်တွေသိသာထင်ရှားတဲ့ကြောင့်လည်းပဲဓာတ်ပုံများနှင့်အတူပန်းပွင့်ပန်းအိုးသို့မဟုတ်ဘောင်နှင့်အတူအလှဆင်ပရိဘောဂအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အတွက် fit စေခြင်းငှါဒါစင်ပေါ်မျိုးစုံနည်းလမ်း configured နိုင်ပါသည်။ ပို. ပို. စက်မှုဇုန်ဖြေရှင်းနည်းများကိုအောင်မြင်စွာအိမ်မှာအသုံးပြုသောခံရဖို့အဆင်ပြေအောင်နေကြသည်။ သင်သည်ဤအိမ်က ” စက်မှု ” အကြောင်းကိုဘယ်လိုထင်သလဲ
သငျသညျ pegboards စဉ်းစားတဲ့အခါ, သငျသညျဖြစ်ကောင်းအများစုကားဂိုဒေါင်နှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှဒုတိယတန်းသို့တန်းဆင်းခဲ့ရသည့်အရုပ်ဆိုးအထပ်သားနှင့်သတ္တုချိတ်အဖှဲ့အစညျးစနစ်များထင်ပါတယ်။ ဤတွင်အိမျတျောကိုမဆိုအခန်းအလုံအလောက်ဆွဲဆောင်မှုရိုးရှင်းတဲ့-to-စေ Dowel-based pegboard ပါပဲ။ တိုက်ခန်းကုထုံးမှာရှေးရှေးကျွန်တော်တို့ကိုဒီတစ်ခုပေါ်တွင်လမ်းကိုပြသ။ သင်တစ်ဦးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်တစ်ဦးလွှကဲ့သို့အချို့သောအခြေခံပါဝါ tools တွေကိုလက်လှမ်းမီလိုအပ်ပါလိမ့်မည်, သို့သော်ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ရိုးရှင်းပါသည်။ ယင်း၏ဆန္ဒရှိအရွယ်အစားဖို့ backboard ဖြတ်ယူပါ။ သင့်ရဲ့တံစို့ပေါက်တွေများအတွက်အကွာတိုင်းတာနှင့်သင့် Dowel ၏အရွယ်အစားဂေါ်ပြားနည်းနည်းသူတို့ကိုထွက်တူး။ အရှည်မှ Dowel Cut နှင့်သင့်ဘုတ်အဖွဲ့စုဝေး။ ထိုအသိသာ, သင်ကရိုးရှင်းပြီးစတုဂံမှကန့်သတ်မဟုတ်ပါဘူး။ သင်ကသင်ရှိသည်သမျှအာကာသ fit သို့မဟုတ်သင့်နှလုံးအလိုရှိခြောက်ချားသမျှပုံသဏ္ဍာန်ဖန်တီးစေနိုင်ပါတယ်။ DIY Project မှ Idea: တစ်ခေတ်သစ် Pegboard စင်ပေါ်စနစ် Make နည်း။
Pegboards နေရာလေးကို tool ကိုစီစဉ်-လူတိုင်းသိတယ်များမှာ ဒီ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကသငျသညျ သာ. ကိုင်နိုင်ပါတယ် ထင်ပါတယ်။ ဤတွင်ထုံးစံစင်ပေါ်နှင့်တည်ဆောက်ဖို့ဘယ်လိုဖွင့် သင့်ရဲ့ pegboard ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုချဲ့ထွင်လိမ့်မည်ဟု tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ။ ထုံးစံဖြတ်ပျဉ်ပြားနဲ့ L screw နှစ်ခုကိုသုံးပြီး, သငျသညျထက်နည်း 15 မိနစ်၌သင်တို့၏ tools တွေဆွဲထားစတင်နိုင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏ဖြတ်ဖို့လွှလိုအပ်ပါလိမ့်မယ် လိုချင်သောအရှည်ဖို့စင်ပေါ်, တွင်း predrill ရန်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်တစ်ဦး chamfer လေယာဉ်။ အစွန်းအတွင်းပိုင်းထိပ်တစ်ခု chamfer ဖြတ်တောက်ခြင်း ဘုတ်အဖွဲ့သင်အလွယ်တကူ pegboard ကပူးတွဲခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
Pegboard ဟာ့ဒ်ဝဲ, Pegboard ခြင်းတောင်း & PEGBOARD တွဲဖက်ပစ္စည်းများ အမှတ်တရတံစို့ဘုတ်အဖွဲ့ခြင်းတောင်းဂိုဒေါင်သိုလှောင်စည်းရုံးရေးမှူး Pegboard Bins သံမဏိ Tool ကို။ Make သင့်ရဲ့ pegboards နှင့်သတ္တုကြိုးတပ်ယူနစ်တံစို့ဘုတ်အဖွဲ့ချိတ်, စတိုးဆိုင်စင်ပေါ်နှင့်လက်လီ display တွေအားလုံးကိုသင်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ထုတ်ကုန် display ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးဖို့ဒီဇိုင်း, faceouts ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည့်စုံဌန်နှင့်အတူပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ Store ကိုထောက်ပံ့ရေးဂိုဒေါင်စတော့ရှယ်ယာအားလုံးကို pegboard ခြင်းတောင်းနှင့်အခြား pegboard ဆက်စပ်ပစ္စည်းရှိပြီး 3pm မတိုင်မီထားရှိအမိန့်အပေါ်ချက်ချင်းတင်ပို့များအတွက်ရရှိနိုင်ပါ။ ဒါ့အပြင်ချိတ်နှင့်အတူစင်ပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကအခြားလိုင်းစျေးဝယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုသငျသညျစနစ်တကျကုန်သွယ်သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ဖို့လိုအပ်အားလုံးစတိုးဆိုင်ကရိယာ display တွေဒီဇိုင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီကြပါစို့
ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောအလယ်အလတ်တာဝန်စင်လုပ်ရန် B ကိုထုတ်လုပ်ရန် ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်သည်။ သင်ဒီမှာအမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်မှုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၏အထူးပြုဒီဇိုင်နာနှင့်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ် စနစ်များ, ငါတို့သည်လည်း Pallet ထိန်သိမ်း, မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်ထိန်သိမ်း, တစ်ဦးက, Cantilever ထိန်သိမ်း, အံဆွဲမီနူးထိန်သိမ်း, ထပ်ခိုးထိန်သိမ်း, FIFO roller ထိန်သိမ်း, ဝါယာကြိုးကုန်းပတ်, ဝါယာကြိုးကွက်ခြံစည်းရိုးစင်လုပ်ရန်အလင်း-တာဝန်စင်လုပ်ရန်, အလယ်အလတ်တာဝန်ပေး။ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးအတွက်စင်လုပ်ရန်စွယ်စုံ pegBoard နှင့်အရောင်များ။ အသုံးပြုမှုထောင်ပေါင်းများစွာ၏။ စက်ရုံတွေ, အလုပ်ရုံ, ကားဂိုဒေါင်, အဘို့အပြီးပြည့်စုံသော display ကိုဒေသများ, လက်လီစတိုးဆိုင်များနှင့်ပိုပြီး။
pegBoard | slatWall | grid | စင်လုပ်ရန် | မှို | Wainscoting | အဆိုပါ Piece အားဖြင့်သတ္တု | သက်ရောက်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | တံခါးကိုဟာ့ဒ်ဝဲစနစ်များ | သံလိုက်ဘုတ်အဖွဲ့ | FreeStanding ပြရန်စိတ်တိုင်းကျဆိုင်းဘုတ် | ပစ္စည်းများ & Bundles | စွဲစေ | မြို့ရိုးအစီစဉ် | စပျစ်ရည်ကိုသိုလှောင်ဆင် | Scratch & ချို Specials